တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: August 2009
ရှေးတုန်းက လူပျို အပျိုချစ်ကြ ကြိုက်ကြရင် တယောက်နဲ့ တယောက် သုံးနှစ် သုံးမိုး စောင့်ကြည့်ပြီးမှ အိမ်ထောင်ရက်သား ပြုကြတယ်ဆိုပဲ။ သုံးနှစ် သုံးမိုးဆိုတဲ့ အချိန်ကာလက တယောက်အကြောင်း တယောက် အတော်အတန် တီးမိခေါက်မိ သိနိုင်ကြတယ် ထင်ပါရဲ့။ ဒီသုံးနှစ်အတွင်း ပိုပြီးတော့လည်း သံယောဇဉ် ရှိကောင်းရှိနိုင်သလို စိတ်ပျက်လက်ပျက် ဖြစ်ပြီးလည်း ခွါပြဲသွားကြနိုင် ပါသေးတယ်။
တကယ်တမ်း သုံးနှစ်ဆိုတဲ့ အချိန်ဟာ ကြာတယ်လို့ ဆိုရင်လည်း ရနိုင်သလို လက်ဖျစ်တတွက်လောက် မြန်တယ်လို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒီကနေ့တော့ ကျန်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်တာကာလကို ကျမ လည်ပြန် လှည့်ကြည့်မိတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ် ၂၀၀၆ သြဂုတ်လ ၃၀ ရက်။
ကြောင်ဆိုးလေး ဂါးဖီးနဲ့ ဒီဘလော့ကို စဖွင့်ခဲ့တယ်။ ကျမက ငပျင်းဆိုတော့ ဘ၀ကို ခက်ခက်ခဲခဲ မဖြတ်သန်းချင်ဘဲ သူ့လို အေးအေးလူလူ နှပ်နေချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ့။ အစကတော့ ဘာရယ်မဟုတ် ပျင်းလို့၊ သူများလုပ်တာ အားကျလို့၊ မလုပ်ဖူးတာ စမ်းလုပ်ကြည့်ချင်လို့၊ ကိုယ်ရေးတဲ့ စာတွေ သူများဖတ်စေချင်လို့ ဆိုတဲ့ ရောက်တတ်ရာရာ ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ ဘလော့ကို စခဲ့ပေမဲ့ တဖြည်းဖြည်း အချိန်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှ ဘလော့က ကျမကို လွှမ်းမိုးလာတော့တယ်။
နေ့တိုင်း ထမင်းမစားဘဲ မနေနိုင်သလို နေ့တိုင်း စာမရေးဘဲ မနေနိုင်တဲ့ ကျမ …
ဘလော့ပေါ်မှာ တွေးမိသမျှတွေ ရေးခဲ့တယ်။
ဘလော့ပေါ်မှာ ပုဂ္ဂလိက ခံစားချက်တွေလည်း ရေးခဲ့တယ်။
ဘလော့ပေါ်မှာ ဟိုဟိုဒီဒီ ဝေဖန် လေကန်ခဲ့ဖူးတယ်။
ဘလော့ပေါ်မှာ သူများမကြိုက်တာတွေလည်း လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်။
ဘလော့ပေါ်မှာ လူသိရှင်ကြား အဆဲခံခဲ့ရဖူးပါတယ်။
ဘလော့ကြောင့် ချစ်ခင်သူ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများ တိုးပွါးခဲ့သလို …
ဘလော့ကြောင့် မုန်းတီးသူ ညှိုးသူ ရန်ဘက်များ ပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်။
ကျမက ဘလော့ကို ဖန်တီးခဲ့တယ်။
ဘလော့က ကျမဘ၀ကို ပြန်လည် ဖန်တီးခဲ့ပြန်တယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဟုတ်ကြီး မှတ်ပေမဲ့ လူကဲခတ်ညံ့တဲ့ ကျမက …
ပြုံးရယ်တာလား လှောင်ရယ်တာလား … နားမလည်ခဲ့။
လက်ခုပ်သံလား တောထုတ်သံလား … မခွဲခြားတတ်ခဲ့။
အားပေးသံလား ကဲ့ရဲ့သံလား … မစဉ်းစားတတ်ခဲ့။
မြှောက်ပင့်တာလား ရိုက်ချတာလား … မကွဲပြားခဲ့။
တွဲကူမယ့်လက်တွေလား ဆွဲချမယ့်လက်တွေလား … မသိနိုင်ခဲ့။
ဟုတ်တယ် …. ကျမ မသိတဲ့ မသိခြင်းတွေ … အများကြီးလေ။
ဒီလိုနဲ့ ခပ်အအ ကျမဟာ …
အရောင်လင်းတိုင်း အလင်းရောင် မဟုတ်ဘူးဆိုတာ … တဖြည်းဖြည်း သဘောပေါက်ခဲ့တယ်။
အဲဒီအချိန်မှာတော့ … ကျမရဲ့ အနက်ရောင်ဘလော့လေးဟာ အဖြူရောင် ဗလာ စာမျက်နှာ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ကျမသည်လည်း ချစ်သောသူများနဲ့ ခွဲခွါ … ကွဲကွာ … ဝေးရာအရပ်မှာ နာကြင်ခြင်းတွေ ခါးသီးမှုတွေ မျက်ရည်တွေ ပြည့်လျှမ်းပြီး အကြင်နာတွေ မေတ္တာတရားတွေ အေးခဲနေခဲ့တဲ့ ဥရောပရဲ့ ဥတုကြမ်းမှာ အမေ့အိမ်ကို လွမ်းခဲ့ရတယ်။
ဘလော့သာ မရေးခဲ့ရင် … လို့ ကျမတွေးကြည့်မိတော့ …
ဘလော့သာ မရေးခဲ့ရင် … ဒီအချိန်မှာ ဒီနေရာ ဒီဒေသကို ရောက်နေမှာ မဟုတ်ဘူး။
ဘလော့သာ မရေးခဲ့ရင် … ချစ်သူတွေနဲ့လည်း ကွေကွင်းရမှာ မဟုတ်ဘူး။
ဘလော့သာ မရေးခဲ့ရင် … မုန်းသူတွေလည်း ခုလောက်များမှာ မဟုတ်ဘူး။
ဘလော့သာ မရေးခဲ့ရင် … ဘ၀ဆိုတာကို သေချာသိဦးမှာ မဟုတ်ဘူး။
ဘလော့သာ မရေးခဲ့ရင် … လူတွေရဲ့အတွင်းစိတ်ကို ခုလောက်သိဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး။
ဘလော့သာ မရေးခဲ့ရင် … ရေသာခို လှေကြုံစီး အပျင်းကြီး နေဖြစ်ဦးမယ်။
ဘလော့သာ မရေးခဲ့ရင် … အပြောင်းအလဲ သိပ်မရှိတဲ့ သမားရိုးကျဘ၀မှာ နိစ္စဓူဝ ကျင်လည်နေရဦးမယ်။
ဘလော့သာ မရေးခဲ့ရင် … … … … ...
ဘလော့သာ မရေးခဲ့ရင် … … … … … …
ဘလော့သာ မရေးခဲ့ရင် … … … … … … …
တကယ်ပါ … ဘလော့က ကျမဘ၀ကို ဖန်တီးသွားခဲ့တာ။
ခုဆို ဘလော့နဲ့ ပတ်သက်ခဲ့တာ သုံးနှစ်သုံးမိုး တိုင်ခဲ့ပြီ။
ဒီကြားထဲ ခဏတဖြုတ် ဥပေက္ခာပြု လျစ်လျူရှုထားခဲ့ရတယ်။
နောက်တော့လည်း မိဘ ဆွေမျိုးတွေ သဘောမတူတဲ့ ကြားက ယောင်လည်လည်နဲ့ အနားသွားကပ်၊ တပုဒ်စ နှစ်ပုဒ်စ ပြန်တင် … အဲဒီလိုနဲ့ မခွဲနိုင် မခွါရက် ပြန်ပတ်သက် မိပြန်တယ်။ လူကြီးတွေ မကြိုက်တာ လုပ်နေရတာမို့ တခါတခါ ဘလော့ရေးရတာ ပြစ်မှုတစုံတရာ ကျူးလွန်နေရသလိုပဲ စိတ်ထဲ ထင်မိပါတယ်။ ကိုယ့်ဘ၀ ကိုယ်မပိုင်သေးတဲ့ အချိန်မို့ ဘလော့ကို စိတ်ရှင်းလက်ရှင်းနဲ့ လွတ်လပ်စွာ ရေးသားခွင့် ကျမမှာ မရှိပါဘူး။ ကျမ ရှုံးနိမ့်မှုတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါ ဘလော့ကြောင့်လို့ ဘလော့ကို လက်ညှိုးထိုးမှာလည်း စိုးရိမ်မိတယ်။
သုံးနှစ် သုံးမိုးကြာပြီဆိုတော့ … ကျမ ဘာလုပ်ရမလဲ ဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ရမယ့် အချိန်ရောက်လာပြီလို့ တွေးမိတယ်။ ဘလော့ကို ကျမ လက်တွဲရမလား … ဒါမှမဟုတ် … လက်တွဲ ဖြုတ်ခဲ့ရမလား။
တကယ်တမ်း ကျမ မလုပ်ရက် … မလုပ်ချင် … မလုပ်နိုင်ပါဘူး။
ဒီဘလော့လေးဟာ ကျမရဲ့ ဘ၀၊ ကျမရဲ့ အဖော်၊ ကျမရဲ့ ရဲဘော်ရဲဘက်။
ကျမ သူ့ကို မစွန့်ပစ်ခဲ့နိုင်ပါဘူး။
ရင်ထဲက ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ခံစားချက်တွေကို စာလုံးလေးတွေ တလုံးချင်းစီနဲ့ သီကုံးရေးဖွဲ့ တည်ဆောက်ခဲ့ရတဲ့ ဒီစာမျက်နှာလေးကို ကျမ ကျောခိုင်း မထားခဲ့ရက်ဘူး။ ဘယ်သူမှမသိအောင် နာမည်တခု သပ်သပ်နဲ့ ပြောင်းရေးဖို့ စဉ်းစားမိပါသေးတယ်။ ဒါလည်း ကျမစိတ်ထဲ သိပ်အဆင်မပြေဘူး။ ကျမ မလုပ်ချင်ဘူး။ ခုချိန်ထိ ကျမ ဆုံးဖြတ်ချက် မချနိုင်ဘဲ တွေဝေနေမိတယ်။
ကျမ ဘာလုပ်ရမလဲ …. …. …. ။
သုံးနှစ်သုံးမိုးထိ တည်တံ့အောင် တစတစ တည်ဆောက်ခဲ့ရတယ်။
သုံးနှစ်သုံးမိုးအချိန်အတွင်း ပြုံးပျော် ကြည်နူးခဲ့ရသလို ညစ်ညူး ငိုကြွေးခဲ့ရတယ်။
သုံးနှစ်သုံးမိုးကာလမှာ အခက်အခဲတွေ အတူတူ ကျော်ဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။
သုံးနှစ်သုံးမိုး … … …
.… .… …. …. …. .…
ကြာခဲ့ပါပြီ … … … ။
၃၀၊ သြဂုတ်၊ ၂၀၀၉
(ကျမ ဘလော့ ၃-နှစ်ပြည့် အမှတ်တရနဲ့ ကိုဟယ်ရီတက်ဂ်တာကို ပေါင်းပြီးရေးလိုက်ပါတယ်။)
ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ အမှတ်တရလေးတွေ …
(၁) ခြေလှမ်း ၃၀၀ပြည့်
(၂) အခါလည်အတွေး (တနှစ်ပြည့်)
Posted by မေဓာဝီ at 5:27 AM 26 comments
Posted by မေဓာဝီ at 4:19 PM 13 comments
ဒီတပတ် အပိုင်း (၇) မှာ အချုပ်တန်းဆရာဖေ ရေးဖွဲ့သီကုံးတဲ့ သံဝေဂတေးထပ်များကို ဆက်လက်ဖော်ပြပါမယ်။ တေးထပ်များကို မဖော်ပြခင် ကဗျာ့ဥပဒေခန်းမှာပါတဲ့ အလင်္ကာဒေါသ ၃-မျိုး အကျဉ်းကို ဦးစွာ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
အလင်္ကာဒေါသ ၃-မျိုး အကျဉ်း
အဗ္ဘန္တရသရက် ဥပမာတင်ပြချက်နှင့်အညီ အထက်စီစဉ်ခဲ့ရင်း က၀ိလက္ခဏာ မာတိကာတို့တွင် -
ပဒ, ၀ါကျ၊ ၀ါကျတ္ထ၌၊ ဒေါသပြစ်ရောက်၊ ရှစ်, ကိုး, ခြောက်များကို၊ ကြောက်ရွံ့ ရှောင်ဖယ်ကြရမည် ဟူသည်ကား -
၁။ ပဒဒေါသ ၈-ပါး
ဟူ၍ ပဒဒေါသ ရှစ်ပါးတည်း။
၂။ ၀ါကျဒေါသ ၉-ပါး
ဟူ၍ ၀ါကျဒေါသ ကိုးပါးတည်း။
၃။ ၀ါကျတ္ထဒေါသ ၆-ပါး
ဟူ၍ ၀ါကျတ္ထဒေါသ ခြောက်ပါးတည်း။
(ဒေါသတခုချင်းစီအတွက် ရှင်းလင်းထားချက်ကိုတော့ ရှေ့တပတ်မှ ဆက်လက် ဖော်ပြပါမယ်။)
ထုံးရွှေရောင် နှောင်မကြော့ချင်ဘူ့း၊ တောင်တမော့ ဗွေစွန်။ မျှောင်ကတော့ ဟေ၀န်မှာ၊ မြေသလွန် စက်ကိန်း။ ကျင့်ခြိုးခြံ ဖြေဖျော်တယ်၊ နေရာတော် တောသစ်ရွက်စိမ်း။ ။ ပင်စကားဝါ့ ရိပ်သာမှာ၊ အ၀ိဇ္ဇာဖျောက်သိမ်း။ တသိက္ခာ စောင့်ထိန်းလို့၊ တယောက်ငြိမ်းကြံစည်။ ကမ္မ၀ါ ရွှေစာထမ်းပါလို့၊ ခေမာလမ်း ကူးလိုက်ပါတော့မည်။ ။ ဆွတ်လှမ်းလို့ ကျွတ်တမ်းကိုရည်တယ်။ ၀တ်ပန်းထည် ဆင်သစ်နှင့်။ ကြင်ချစ်သူ ဖော်မခေါ်၊ မြန်းချင်ပေါ့နော်။ မေတ္တာသွန်းတဲ့ ငယ်ကျွန်းဖော်ငယ်၊ အလွန်းတော် ပြေရစ်ရှာတော့လေး။
လောကဓံ ပြည်ဓလေ့ကို၊ သည်ယနေ့သိမ်းမည်။ ကြည်မမွေ့ကိန်းနယ်ကို၊ ငြိမ်းလွယ်အောင် ကြံပေါ့။ သူတော်မြတ် ခန္တီဝါလို၊ စံမှီရာ ယွန်းစို့ အသော့။ ။ သင်္ခါရဖြစ်ပျက် မှောင်ကို၊ နှစ်သက်ပေါင် တန်တော့။ သစ်နက်ရောင် ဖန်ဝါပျော့နှင့်၊ ကန္တာကြော့ ရိပ်လယ်။ ခင်လေးမောင် စေနာထူးပါလို့၊ ခေမာကူး ကြည်လိုက်ပါတော့မယ်။ ။ သိုဝှက်လို့ ကိုယ်တွက်ရွယ်တယ်၊ ဖိုလ်မဂ်ကွယ် ရည်စူးလို့။ ကြည်နူးတဲ့ ဘာဝနာ၊ ပွါးချင်တော့သာ။ ၀ဋ်ကိန်းက လွတ်ငြိမ်းခွါတယ်၊ ဒွတ္တိံသာ မြဲချင်ပေါ့လေး။
နန်းသပြေပင်ညွန့်နှင့်၊ စမ်းရေကွန့်ရိပ်ပြန်။ ပန်းဟေ၀န့် ဗိမာန်၊ အဓိဋ္ဌာန် တင်မြန်း။ ပင်လုံးကျွတ် ပွင့်ဝေဖြာတယ်၊ ဧကစာသုံးတဲ့ သင်္ခမ်း။ ။ မြတ်နွယ်ညွန့် တည်မရာမှာ၊ လှည့်လက်ျာ ခွေမြန်း။ စည့်မျက်နှာ မြေကြငှန်း ငယ်သို့၊ ချွေမြန်းလို့ စိတ်သာ။ တင်စလွယ် ဆင်ခြယ်သ၊ အဋ္ဌင်္ဂ သုံးဆောက်တည်ကာ။ ။ တကိုယ်မွေ့ ဆိတ်ငြိမ်ရာဝယ်၊ နိဗ္ဗိန္ဒာ ကြည်ဇောနှင့်။ သည်တောမြိုင်ဝေပူ၊ ပန်းစုံကကြူ။ ကမ္မဋ္ဌာန်းရ အုတ်ဂူမှာ၊ ရုက္ခမူ ပျော်ဆုံးပလေး။
နှစ်ကိုယ်တူ ကြံရာကျအောင်၊ ကန္တာရ လှမ်းမယ်။ ဖလ်ကြာကြွ နန်းလယ်မှာ၊ စံမြန်းတယ် မမွေ့။ မူခြားလို့ ဂူအားကို ရှာမယ်၊ လူပါးရာ မြန်းစို့ တမေ့။ ။ သံသာရ ရဟတ်နယ်ကို၊ ပြတ်ချင်တယ် ယနေ့။ မေပါလျှင် ချွေတာလို့ ရွေ့နိုင်ရဲ့၊ သေလာကွေ့ မြိုင်လယ်။ နိဗ္ဗူကို စိတ်တူကြွရအောင် ဘိက္ခူမ လုပ်ပါတော့ကွယ်။ ။ ပုတီးနှင့် ခရီးလယ်မှာ၊ ပြီးစလွယ် ဟန်သိမ်းလို့။ ဖန်ပိန်းကြော့ နံ့သာနီလွင်၊ လဲစို့ ခင်ခင်။ ခိုင်တကြော့ နဂိုရ်ယဉ်ငယ်၊ မငြိုငြင် စမ်းပါနှင့်လေး။
နှစ်ကိုယ်တူ ဆံချလို့၊ ကြံကြစို့ သက်လယ်။ သံသာရစက်နယ်ကို၊ ထွက်လွယ်အောင် ရည်စူး။ ချစ်တဲ့ဘေ စိတ်တူညီလျှင်၊ ဘိက္ခူနီ လုပ်ခဲ့ ကျော့မှူး။ ။ ဘ၀တိုင်း တသာကီရယ်၊ ပါရမီဆုထူး။ ညာမဒီ ချစ်ဦးနှင့်၊ ကျူးရင့်ကာ နှစ်ကိုယ်။ နိဗ္ဗာန်တိုင် စိတ်သန်မှု၊ ဓိဋ္ဌာန်ပြု တောင်းဆုပန်ဆို။ ။ သမ္ဘူလနုပျိုလို၊ ကုသိုလ်တော်တရားနှင့်။ လင်သားဝတ် ဤငါးဖြာ၊ မြဲပမကွာ။ ဖေချစ်တဲ့ ခင်ကညာရယ်၊ ရည၀ါ ခိုအောင်းစို့လေး။
သလွန်တော် ဂမုန်းပွင့်မှာ၊ ကုံးဆင့်ဆင့် ပြုကာ။ အုံးစွင့်စွင့်နုစွာဝယ်၊ ယုဇနာ ရှိန်ကြွေ့။ ရွှေညဉ့်ရုံ လွန်ဆန်းပွေတယ်၊ ဇွန်ပန်းငွေ ဖြန်းရွေ့သိမ်မွေ့။ ။ အိပ်ရာတော် သတ်မွှေးထုံတယ်၊ နတ်သွေးလှုံဓလေ့။ မြတ်လေးငုံ အပြေ့နှင့်၊ ပြကတေ့မူရာ။ ခြင်ရံတော် တကယ်ဆန်းငယ်က၊ စပယ်ပန်း လှပ်လှပ်သာဖြာ။ ။ သဇင်ပန်း မုတ်သီဟာမှာ၊ ဇီဇ၀ါ တန်တိုင်းနှင့်။ ကသိုဏ်းကျ ဂန္ဓမာ တောင်ရံ၊ နှင်းရီမြကန်။ ။ ကျောက်စိမ်းမြ ဒီဃာရံကို၊ ညီလာခံ ကွန့်မယ်ပလေး။
အချုပ်တန်းဆရာဖေရဲ့ သံဝေဂ တေးထပ်တချို့ထဲမှာ တောထွက်တာတောင် အဖော်လေးနဲ့မှတဲ့။ အင်းလေ … ဒါကြောင့်လည်း သူတော်ကောင်း သူမြတ်လောင်းတွေအတွက် ပါရမီဖြည့်ဘက်က အရေးကြီးပေတာကိုး။ နိဗ္ဗာန်ကို တယောက်ထဲ သွားရမှာ ပျင်းတဲ့ အတောင်နှစ်ဆယ်ဝတ်တွေ ဆရာဖေ့ တေးထပ်လေးတွေ ဖတ်ပြီး ကျေနပ်နှစ်သက်ကြမယ် ထင်ပါရဲ့။
၂၆၊ သြဂုတ်၊ ၂၀၀၉
Posted by မေဓာဝီ at 9:56 AM5comments
Posted by မေဓာဝီ at 4:02 AM 15 comments
Posted by မေဓာဝီ at 12:45 PM 10 comments
သျှင်ဥတ္တမကျော်၏ ဆယ့်နှစ်ရာသီတောလား ရတု
တထာဂတ၊ နှိုင်းဆမမြော်၊ မြတ်ရှင်တော်ကို၊ ပူဇော်ကြရာ၊ အကြောင်းမှာကား၊ ရာသီသမိုက်၊ နွေစရိုက်ဝယ်၊ လေလိုက်သာမော၊ ညှာကြောခိုင်လျော့၊ မြိုင်ကြော့ကြော့မှာ၊ လျော့ကေသာရစ်၊ ရထည်သစ်ကို၊ စနစ်ခေါက်လွင်၊ သမိုက်ဆင်သည်၊ ဘယ်တင်သိုင်းရစ်၊ လှုံထည်သစ်နှင့်၊ နတ်စစ်ကညာ၊ မေခလာလျှင်၊ နန္ဒာသူဇ၊ သုနန္ဒနှင့်၊ စိတြမှန်ကူ၊ ဘုံမြင့်သူတို့၊ နှိုင်းတူဘက်ကင်း၊ တရားမင်းကို ၀ပ်စင်းခယ၊ ပူဇော်ကြ၏၊ ဟေမမြိုင်ခွင်၊ ပျော်မြူးရွှင်သည်၊ သမင်ဒရယ်၊ ယုန်ငယ်စိုင်ဆတ်၊ သုံးလူ့နတ်ကို၊ ဦးညွတ်ကြရာ၊ ဟိမ၀ါဝယ်၊ ပါဏာတိပါတ်၊ ငှက်ခတ်သမား၊ မုဆိုးများလည်း၊ လေးမြားထမ်းကာ၊ တောလည်လာသော်၊ မြတ်စွာသုံးလူ့၊ သဗ္ဗညုကို၊ ဖူးလိုညွှတ်ခ၊ စည်းဝေးကြသည်၊ ဘုမ္မရုက္ခာ၊ အာကာသဓာတ်၊ မိုးနတ်မကျန်၊ ဂုမ္ဘဏ်မကြွင်း၊ ဂဠုန်မင်းနှင့်၊ လေးစင်းအဏ္ဏ၀ါ၊ အာဏာစိုးနှိမ်၊ ရေနန်းအိမ်က၊ နာဂိန္ဒရ၊ ပနန္ဒနှင့်၊ စသည်များစွာ၊ နတ်သူရာတို့၊ ထိန်ဝါသန့်ရှင်း၊ ကိုယ်ရောင်လင်းပ၊ ၀ပ်စင်းကြ၍၊ သကျရှင်တော်၊ သုံးလူ့ဘော်ကို၊ ပူဇော်ညွတ်လာ၊ နတ်ကညာအား၊ စိတ်မှာစွဲကပ်၊ ငှက်ခတ်မုဆိုး၊ အာရုံကိုး၍၊ မြတ်နိုးကြင်နာ၊ ၀မ်းမြောက်စွာနှင့်၊ ပျူငှါသစ်ဆန်း၊ ကြော့ကြငှန်းမှာ၊ တော့သန်းရွေလယ်၊ တဘုန်းမယ်တို့၊ ရွှေကြယ်ရံခ၊ စန်းငွေလသို့၊ ဘ၀တင့်လှိုင်း၊ မြတနှိုင်းသို့၊ ဘက်ဆိုင်းအကုန်၊* တက်လှိုင်းပုံသည်၊ ၀သုန်ရေက၊ ရှိသမျှကို မကမကန်၊ အတန်တန်နှင့်၊ ပြန်ပြန်လှယ်လှယ်၊ ကြင်ရေးချယ်ခဲ့၊ ဆယ်လှော်စံသိန်၊ ဉာဏ်ဖြင့်ချိန်လျက်၊ ဘယ်ခါသက်အံ့၊ အမြွက်သံရှင်၊ သိလိုချင်ခဲ့၊ ကေရှင်မာလာ၊ ထုံဂန္ဓာဝယ်၊ မိလ္လာရည်ရွက်၊ တာသူ့ဘက်မှာ၊ အသက်ပဏ္ဏာ၊ သဆက်ရာလည်း၊ မဟာဇောတိရသ်၊ လောကဓာတ်ဝယ်၊ မျက်မြတ်ရည်မှန်၊ ဘိုးနဂ္ဃံသို့၊ ဖန်ဉာဏ်ယူဆင်၊ တင့်ရေးအင်ကို၊ တွေးထင်ရော်ရမ်း၊ ခက်လွန်လွန်းစွ၊ ထက်စွန်းဘုံပျံ၊ ယုန်ဗိမာန်ကို၊ လက်တံလှမ်းချီ၊ ဖမ်းမမှီသို့၊ မြင့်သီဝေးမြှော်၊ ထင်ရေးရော်၍၊ တော်ညာဝင်ကို၊ လွမ်းရေးပိုခဲ့၊ မြင့်မိုရ်မဏ္ဍလာ၊ ၀တိန်ချာဝယ်၊ တိမ်ပြာကိုးမှတ်၊ ရိုးမည်နတ်လည်း၊ အမြတ်ကျော်ခေါင်၊ ကောဝိညောင်က၊ လွမ်းအောင်သာလင့်၊ ဗျာပွားဆင့်လိမ့်၊ သက်ပင့်ဆွတ်ချိမ့်၊ ကြင်သည်းငြိမ့်မျှ၊ ရွှေအိမ့်ပရမေ၊ လှလွန်းဆွေသာ၊ နောင်ကိုးရာဟု၊ စိတ်မှာမပြယ်၊ အာရုံခြယ်လျက်၊ ရှုဘွယ်တပုံ၊ ယဉ်မျိုးစုံခဲ့၊ ကိုးဂုဏ်လူ့ဆွေ၊ အစိန္တေ၏၊ ခြောက်ထွေရောင်လျှပ်၊ ဣဒ္ဓိပါဒ်ဖြင့်၊ ငှက်ခတ်သမား၊ လူတလွှားတို့၊ မြင်ငြားကုန်ကြ၊ ပီတိကြွ၍၊ လွှတ်ထလေးမြား၊ ကွယ်ရာထားလျက်၊ ဘုရားရှင်ဘုန်း၊ လျှိုးပုန်းရွံ့ကြောက်၊ တောတလျှောက်၌၊ နတ်လျောက်နတ်မှာ၊ သုံးလူ့ချာကို၊ သဒ္ဓါလှုလှု၊ ပူဇော်မှုဖြင့်၊ တောထုတောင်ရိုး၊ ပျပ်ဝပ်ကျိုးသည်။ ။ မုဆိုးချုံက လ,ချောင်းတည်း။
A crowd of worshippers hail the great superman. It is summer. In the delightsome forest realm the whistling wind rocks the leaves and branches to and fro.
Megala, Nanda, Thuza and Thunanda bend their aureoled brows at the feet of the righteous King. The tresses of these high-born fairy forms are loosened in sweet disorder and their spotless saris are bravely thrown about their snowy shoulders.
The deer and the hare that gambol and bound in the woodland join the adoring throng. Hunters of fur and feather while roving in the forest approach the Sage. Their hearts spring up in adoration.
The fairy inhabitants of the earth and air and water and wood appear in radiant forms and fall on their faces before the superman.
The sight of the worshipping goddesses thrills the huntsmen with passion and pleasure. The strange ways of the divine-galaxy are full of sex and the spell of sex. They call to mind princesses who move about in the place attended byatrain of million maids. They shine clear as the fair bosom of the silver moon engirt by stars of gold. Resplendent as an emerald that darts its luster inaflood of light, they eclipse all that is fair on earth and in water.
The simple swains wonder when the celestial beauties would open their hearts and utter their loves in silvery accents. The love-smitten company lay their lives lowly at the feet of the goddesses as if for priceless gems. Is it worth their while? One may doubt and doubt. But who can tell? They are like those that think to lay hold of the moon with their pigmy hands. This dismal fact flashes upon their faint minds. Mayhap the god of the skies seated on Meru’s brow has inspired in themahopeless passion. Thus they fondly surmise.
The ravishing looks of the goddesses catch their breath away and put their hearts inaflutter. They still dream of their brides-to-be with winsome airs and graces. The gladful light of the six rays flashing forth from the great Sage dispels their wistfulness. They lay aside their bows and arrows and in utter faith gaze towards Him with adoration together with the fairy worshippers.
ဒီနေ့တော့ အသစ်ရေးရမှာ စိတ်မပါသေးလို့ သျှင်ဥတ္တမကျော် တောလားပဲ တင်လိုက်ပါတယ်။ ရာသီဥတု ကောင်းရင် နက်ဖန်ခရီးတခု သွားဖို့ရှိပါသေးတယ်။ ကဗျာစာဆို William Wordsworth ရဲ့ ခြေရာများ ရှိသော အရပ်ဒေသကိုပါ။ သွားဖြစ်ရင်တော့ ပုံလေးတွေနဲ့ ခရီးသွားမှတ်တမ်း ပို့စ်တပုဒ်လောက် တင်ဖြစ်မယ် ထင်တာပါပဲ။
၁၇၊ သြဂုတ်၊ ၂၀၀၉
* ဘက်ဆိုင်းအကုန် ဖြစ်ရမည့်အစား ဘက်ဆိုင်းအကုတ်ဟု မှားရိုက်ထားသည်ကို ပြန်ပြင်ဆင်ထားပါသည်။
အမှားပြင်ပေးသော ဆရာတော် ဦးဥတ္တရဉာဏကို ကျေးဇူးတင်ပါသည် ဘုရား။
Posted by မေဓာဝီ at 6:37 AM2comments
Posted by မေဓာဝီ at 8:00 AM9comments
ငယ်စဉ်တောင်ကျေး အကလေးအရွယ် စာမဖတ်တတ်ခင်ကတည်းက … ဆွမ်းအုပ်နီနီ … ၀ါဆိုဝါခေါင် … မောင်လေးရေ ထပါတော့ … အစရှိသည့် … အသံသာသာ တေးကဗျာလေးတွေနှင့် ရင်းနှီးခဲ့ရသည်။ အမေဆိုပြသည့် အဆိုပါ ကဗျာချိုချိုလေးတွေကို နားထောင်ရင်း မှေးစက်ခဲ့ရသည့် ညပေါင်းများစွာ။ ဒီ့နောက်မှာတော့ ကိုယ်တိုင် သီဆိုနိုင်သည်ထိ အလွတ်ရခဲ့ပြီ။ လူကြီးတွေက ဆိုပြခိုင်းလျှင် မမောတမ်း ဆိုပြခဲ့ရသေးသည်။ ဆိုသာ ဆိုနေမိသည်၊ ထိုကဗျာလေးများ၏ ဖန်တီးသူက မည်သူမည်ဝါ ဆိုသည်ကိုပင် မသိတတ်သေး။
ဘုရားခန်းထဲမှာ ထားထားသည့် ကျောက်ကာလုပ် ယွန်းဆွမ်းအုပ် နီနီကြီးကို မြင်တိုင်း … ဆွမ်းအုပ်နီနီ ကဗျာလေးကို ရွတ်ဆိုမိသည်။ ခြံ၏ အရှေ့တောင် ထောင့်က ဇမ္ဗူ့သပြေပင်ကြီး အသီးတွေသီးပြီး တဖြုတ်ဖြုတ်ကြွေတိုင်း ၀ါဆိုဝါခေါင် ကဗျာလေးကို ရွတ်ဆိုမိသည်။ ရွတ်ရင်း ဆိုရင်း အုန်းလက် နွားလေးကိုလည်း ခင်လာပြီ၊ မျှော့နက်မည်းကြီးနဲ့လည်း ရင်းနှီးလာပြီ။ ညီအမတတွေ ခရေပန်းကောက် သွားကြလျှင်တော့ ပန်းသည်ကဗျာလေး တကြော်ကြော် ရွတ်ဆိုကြစမြဲ။
သည်လိုနှင့် စာကို စတင် ဖတ်တတ်ချိန်မှာတော့ အဖေက “မောင်ခွေးဖို့ ကဗျာများ”နှင့် မိတ်ဆက်ပေးလေသည်။ မောင်ခွေးဆိုသည့် မြန်မာဆန်သော၊ ကျေးလက်ဆန်သော၊ ကလေးဆန်သော နာမည်ကလေးနှင့် ဆိုလွယ်၊ ရွတ်လွယ်၊ မှတ်မိလွယ်သော ချစ်စဖွယ် ကဗျာကလေးများကို ထိုအချိန်မှစပြီး စွဲလမ်းခဲ့ရသည်။ ထိုစဉ်ကတည်းက ကဗျာရှင် မင်းသုဝဏ်ဆိုသည့် အမည်နာမနှင့် ရင်းနှီးခဲ့ရ၏။ သူသည်ကား ကလေးတွေကို ချစ်သော စာဆို၊ ကလေးများကို အလေးထားသော စာဆိုတဦးပင်တည့်။
အိပ်ခန်းခေါင်းရင်းက ခရေပင်ပျိုကလေးမှာ ခရေဖူးတွေ စတင်ဝေသည့် အချိန်မှာတော့ သိတတ် နားလည်တတ် ခံစားတတ်သည့် အရွယ် ရောက်၍ လာလေပြီ။
“လယ်တောကပြန် …” ဆိုသည့်ကဗျာလေးကို ခံစားကာ ကရုဏာသက် နေမိတတ်ပြီ။
ပန်းပုဆရာ ဦးအောင်ချာ၊ ဆင်စွယ် မင်းသမီးရုပ်ကလေးနှင့် အစွဲလမ်းကြီးသည့် မောင်ချစ်တို့၏ “ဘကြီးအောင်ညာတယ်” ဇာတ်လမ်းလေးကို ဖတ်ပြီး ၀မ်းနည်းတတ်နေပြီ။
၀ါတွင်းဥပုသ်စောင့်တိုင်း ငှက်ကလေးက စိုးစီစိုးစီ … ဆိုသည့် “၀ါတွင်းချိန်” ကဗျာလေးကို သတိတရ ရှိတတ်နေပြီ။
ဝေဆာနေသည့် သပြေညိုတွေကြောင့် စိတ်အင်အား တက်ကြွခဲ့ဖူးသည်။
ပျဉ်းမငုတ်တိုက အညွန့်တွေ ဝေဖြာမည့် နေ့ကိုလည်း မျှော်လင့်ခဲ့ဖူးသည်။
ဂုတ်ကျားကျယ်လောင် ရမ်းရော်ဟောင်တဲ့အခါ … ဖိုးမောင်လာပြီလားဟူ၍လည်း တွေးမိခဲ့ဖူးသည်။
သည်လိုနှင့် … သည်လိုနှင့် …
သပြေညိုအရိပ်မှာ မှေးတခါ တွေးတလှည့် ခိုနားခဲ့ဖူးလေ၏။
ဒီကဗျာ၊ ဒီစာ၊ ဒီပုံပြင်တွေကို ရွတ်၍မ၀၊ ဖတ်၍မငြီး။ ကြီးပြင်းခဲ့သည့် ယခုထက်တိုင် ဒီစာတွေ ကဗျာတွေက ရိုးမသွား၊ ဟောင်းမသွား၊ ခေတ်အဆက်ဆက် အမြဲ ဆန်းသစ် လတ်ဆတ်နေဆဲ။
စာဆိုကား ကွယ်လွန်ခဲ့သည်မှာ ၅ နှစ်တိုင်ခဲ့လေပြီ။
ကလေးများအတွက် … လူငယ်များအတွက် … မြန်မာပြည်သူလူထုအတွက် စာပေများစွာ ဖန်တီးခဲ့သော စာဆို၏ စာကဗျာများကား မညှိုးမနွမ်း အမြဲလန်းဆန်းနေမည့် ပန်းမြတ်သပြေညိုလို မြင့်ရှည်စွာ ထာဝရဝေဆာ နေဦးမည်တကား။
(၂၀၀၄ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သူ ဆရာကြီး မင်းသုဝဏ်အား ဤစာစုဖြင့် လေးမြတ်ရိုသေစွာ ကန်တော့လိုက်ပါ၏။)
Posted by မေဓာဝီ at 4:31 AM5comments
ဒီတပတ် အပိုင်း (၆) မှာ တင်မယ့် သံဝေဂ ကဗျာခန်းမှာ စလေဦးပုညရဲ့ သံဝေဂတေးထပ်တွေကို ဖော်ပြပေးပါမယ်။ တေးထပ်တွေ မဖော်ပြခင် ကဗျာ့ဥပဒေ ခန်းမှာပါတဲ့ ကဗျာစာပေကို အဗ္ဘန္တရသရက်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြဆို ထားချက်ကို ဦးစွာ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဤသို့ ရုဠှီအနွတ္ထ၊ အမည်ထူးရကြောင်းကို၊ ပြခဲ့သည် အချက်ချက်၊ ထိုစီကုံးဘွဲ့ဆိုရိုး အဆက်ဆက်တို့သည်၊ အထက်ဆိုခဲ့ရင်း ကဗျာသာလျှင် အမွန်ပဘ၀ ဖြစ်ရလေကုန်သတည်း။
ဥပမာကား - သြဇဋ္ဌမက ရုပ်ကို အထူးဆောင်သဖြင့်၊ တထောင်ဂုမ္ဘန်၊ စောင့်ဝန်းရံသော၊ အဗ္ဘန္တရ သရက်ပင်မင်းသည်၊ အချင်းအ၀န်း၊ သွန်းသွန်းမြင့် လျက်၊ ဆင့်ဆင့်တက်သော ခက်မငါးသွယ်- ခက်ငယ်အပေါင်းတို့ဖြင့် တန်ဆာဆင်လျက် စည်ပင်ကြီးမြင့်ရကား-အသီး, အပွင့်, ရွက်ရင့်, ရွက်နုနှင့်၊ ဝေေ၀ဆာဆာ၊ လူရှင်အပေါင်းတို့ သုံးဆောင်မှီခိုရန် ဖြစ်ပေါ်လာသကဲ့သို့ သံသရာ, ပစ္စုပ္ပန် နှစ်တန်သော ဂုဏ်ကျေးဇူးကို၊ အထူးဆောင်ရွက်သော အားဖြင့် များစွာသော ပုဒ်ဗျည်း အက္ခရာ၊ သဒ္ဒါအနက်တို့ဖြင့် ခြံရံသော၊ အဗ္ဘန္တရ သရက်ပင်မင်းအတူ၊ လေးဆူသော က၀ိပုဂ္ဂိုလ်တို့ ဘွဲ့ဆိုစီကုံးသော ကဗျာပင်မင်းသည်၊ ချင်းဝန်းမြင့်လျက်၊ ဆင့်ဆင့်တက်သော၊ ခက်မငါးဖြာ သဏ္ဌာန်၊ ဂန္ဓ, ဗန္ဓ, ဂါထာ, စုဏ္ဏိယ, ဂီတ-ဟူသား ဤငါးပါးလျှင်၊ ထွားထွား ကျိုင်းကျိုင်း၊ ကိုင်းကြီးခက်မထွက်၍၊ ခက်ငယ်အသွင်၊ အဆင်တန်ဆာ၊ အစဉ်လာသော၊ လင်္ကာမျိုးအပေါင်းတို့ဖြင့်၊ ကြီးမြင့်ရကား၊ အသီး, အပွင့်, ရွက်ရင့်, ရွက်နုတို့တပြေး၊-
ဧချင်း, ပျို့, ရတု, ရကန်, အဲ, အန်, လူးတား၊ ထူးခြား အံ့ဖွယ်၊ လွန်ဆန်းကြယ်သော၊ မယ်ဘွဲ့, မောင်ဘွဲ့, တောဘွဲ့, တောင်ဘွဲ့, ဘုန်းတော်ဘွဲ့နှင့် နန်းဘွဲ့, မှာတမ်း, တမ်းချင်း, လွမ်းချင်း, ကာချင်း, သာချင်း, ဒုံးချင်း, ဟန်ချင်း, ရဲတင်း, သံပေါက် အမျိုးမျိုး, မိုးတော, မယ်တော, မောင်တော, သပြေလား, ရေလား, ဘုရားတိုင်, သိကြားတိုင်, အခိုင်ပေါ်ထွန်း၊ မော်ကွန်း, သံပိုင်း, သမိုင်း, ကျောက်စာမျိုး အရပ်ရပ်၊ တေးထပ်, နှစ်ချိုး, သုံးချိုး, လေးချိုး, ပတ်ပျိုး, ဘွဲ့, ကြိုး, ယိုးဒယား, သီချင်းခံ, နတ်သံ, ဟောစာ, ဇာတ်အုပ်အစုစု၊ ၀တ္ထုပုံပြင်, ရာဇ၀င်, မဟာဝင်, အနာဂတ၀င်-
စသော ကဗျာပင်ကြီး၊ ထာဝရစဉ် သုံးဆောင်မှီးခို၍၊ မငြီးနိုင်အောင်၊ ကဗျာသီး, ကဗျာပွင့်၊ နုရင့်စွာလျက်၊ ခါမပျက်ပင်၊ ကဗျာရွက်, ကဗျာဖူး ဖြစ်ပွါး လေကုန်သတည်း။
ဤကား - “ဥပမာယ မိဓေ ကစ္စေ၊ အတ္ထံ ဇာနန္တိ ပဏ္ဍိတာ” မိလိန္ဒပဥှာနှင့်အညီ ဥပမာ, ဥပမေယျ၊ ထင်ရှားစွာ ပြခြင်းတည်း။
ဤ ဥပမာ ဥမေယျ၌ အဗ္ဘန္တရ သရက်သီးပင် ဖြစ်လင့်ကစား ဥတုဝိပရိတ် ဖြစ်သော အားဖြင့်၊ မထွားမကြီး၊ လေသီးအတီ၊ ရာသီချိန်နုံ့၊ ပိန်ရှုံ့စေ့ညှပ်၊ ပွန်းပြတ်ဒဏ်ထိ၊ ညှာရိပုပ်နာ၊ အခါမမြင့်၊ မရင့်မအောင်၊ နေလောင်မှည့်ဝင်း၊ တွင်းကျင်းလှောင်အုပ်၊ လေမှုတ်စိမ်းကြွေ၊ မြွေကိုက်, ငှက်ပေါက်၊ လောက်ကိုက် ပိုးစား၊ သို့ စသော အသီးများကို သုံးစားမိက၊ သာဝဇ္ဇပင် ဖြစ်ရဦးမည်။
မဖြစ်သည်တိုင်၊ ဂုဏ်ရည်တိုးအောင်၊ ကျိုးမဆောင်ဖြစ်၍၊ ခေါင်ခေါင်လောဘ၊ ပြောကြသဖြင့်၊ သုံးစားခြင်း မပြုသင့်သကဲ့သို့၎င်း။
ဥတုမြေရေ၊ လေနှင့်နေနှင့်၊ အခွင့်ညီညွတ်၊ ပြစ်ကင်းလွတ်သော၊ မွတ်မွတ် ထွားထွား၊ ဆင်းနံ့အားဖြင့်၊ စား၍သီးသီး၊ သုံးမငြီးသား၊ လုံးကြီးရွှေဝါ၊ ရသာနှစ်ပြည့်၊ ပင်ပေါ်မှည့်များကိုသာ မည်သည်နေ့ရက်၊ မပျက်စိမ့်ငှာ၊ သုံးဆောင်ရာ သကဲ့သို့၎င်း။
သဒ္ဒါပျက် အနက်ဆိုး၊ မိုးမအောင်-လေမအောင်၊ နေလောင်သိုးအိုက်၊ ဖိုးမထိုက်သော၊ ပိုးကိုက်လောက်စား၊ သစ်သီးများကဲ့သို့ -
“ကတ္တားကတ္တီ၊ ကမ္မီကမ္မ၊ ကရဏဟိတ်ဖိုလ်၊ လောင်းဆိုစုဒ်ထုတ်၊ ပဒုဒ္ဓါရ၊ ပဒပဝေ၊ မခြေမမြစ်၊ အနှစ်မထင်၊ အလင်္ကာရ၊ ၀ိဘာဂဖြင့်၊ ပဒ၀ါကျ၊ ၀ါကျတ္ထ၌၊ ဒေါသအပြစ်၊ ရှစ်နှင့်ကိုးခု၊ ခြောက်ထွေစုသား”။
ဟူသည်နှင့်အညီ၊ ဒုဝုတ္တဒုဗ္ဘာသီ၊ ဂုဏ်ဆီနှစ်မဲ့၊ စပ်ဆိုဘွဲ့သော၊ ထိုကဲ့သို့ ကဗျာများကို တ၀ါးလေးသစ်မျှ၊ ရေးခြစ်တန့်နား၊ မိမိလည်းမပြန့်ပွါးစေဘဲ၊ တပါးနှစ်မဲ့၊ ရေးခြစ်ခဲ့သည်ကိုလည်း၊ ပြစ်မတဲ့ပင်၊ ထင်မိစေကာ၊ အစဉ်လာသော၊ ပညာရှိတို့၊ မနှစ်မျို့က၊ မပျို့နှလုံး၊ မထုံးမနှောင်၊ အနည်းငယ်မျှ မသုံးဆောင်မိစေဘဲ၊ ရင့်အောင်ဝင်းဖန့်၊ ဆင်းနံ့စုံစီ၊ ဂုဏ်ဆီနှစ်ပြည့်၊ ပင်ပေါ်မှည့်ကဲ့သို့သော၊ နှိုင်းရှည့်အရာရာ၊ သဒ္ဒါလင်္ကာရ၊ အတ္ထာလင်္ကာရနှင့် ပြည့်စုံ၍၊ ဂုဏ်သိဒ္ဓိပြီး၊ ကဗျာသီးများကိုသာ၊ မငြီးမငွေ့၊ တမြေ့မြေ့ပင်၊ လွေ့လွေ့ရမ်းရမ်း၊ ဖိတ်ဖိတ်လျှမ်းမျှ၊ စိတ်ဝမ်းထဲသို့၊ မှီဝဲသုံးဆောင်နိုင်ကြပါစေ ဟူလိုသတည်း။
စလေဆရာကြီး ဦးပုညဆို - သံဝေဂတေးထပ်
အဇ္ဇေ၀ သုဝေး၀၊ ခုတွေးဆပြန်လှန်။ ယနေ့လား နက်ဖြန်၊ ရက်မှန်မှန် မသိ။ အနိစ္စလက္ခဏာ၊ သန်ဘက်ခါ ဆုံးစမရှိ။ ။ လူ့အသက်ပုံပမာ၊ ပဒုမ္မာနေထိ။ ကုန်မကွာ ကြွေရိလို့၊ ဇာတိပ သန္ဓေ။ ၀ဋ်ဒုက္ခာ သံသာဝဲ၊ တနဲစီ ဖြစ်ပျက်သာပွေ။ ။ နောင်ရိက္ခာ ပါလေအောင်၊ အဋ္ဌင်္ဂေ သီလနှင့်။ တလ လေးရက်ဝယ်၊ မြဲပါတော့မယ်။ ကျန်နှစ်ဆယ့် ခြောက်ရက်ဝယ်၊ ငါးပါးကွယ် သီလနှင့်လေး။
နေ့မြင်လို့ ညပျောက်၊ ကြောက်စရာ့ ရုပ်ကောင်။ ဤကာယ ပုပ်ဟောင်ကို၊ မဟုတ်အောင် ကြံဘူး။ မမွေ့လို့ ယနေ့ခွါမယ်၊ ပြည်ဇေယျာကမ်းသို့ ရည်စူး။ ။ သည်ဝဋ်က ကိုယ်လွတ်ရှောင်မယ်၊ ထေရ်ထွဋ်ခေါင် ထံဦး။ ဓမ္မချောင် တောင်ထူး၊ နောင်ကူးလိမ့်ပြောင်ပြောင်။ လေးတရာ ရွှေဆီမွှေးငယ်နှင့်၊ ခင်ခင်လေး ထုံးနေကြသျှောင်။ ။ မုန်းပါပေါ့ မဖုန်းခေါင်ငယ်၊ ကျော့သုံးတောင် သင်ရိတ်လို့၊ ရွှေစိတ်က အနုမြူ၊ စိုးမရွံ့သူ၊ ကြင်မမွေ့လို့ ခင်လေ့လူကို၊ သာဓုမူ ခေါ်ရစ်လို့လေး။
ဗဟန်းချောင် ရိပ်သိင်္ဂ၊ နိဗ္ဗိန္ဒပွါးယူ။ ဆိတ်ငြိမ်စွ မှားမကူအောင်၊ တရားယူ ကျင့်သုံး။ ကိလေသ ယုတ်ဓမ္မေကို၊ သမုစ္ဆေ ကင်းဖြတ်အထုံး။ ။ စက်သြဃ ၀ဋ်နှောင်ဟာကို၊ လွတ်အောင်သာ ခွါရုန်း။ အရိယာကျင့်ထုံးဖြင့်၊ ဆင့်ဆင့်သုံး ဘာဝနာ။ ကသိုဏ်းဈာန် ဆင်မြန်း၊ တင်ကမ္မဋ္ဌာန်း ပွါးချင်တော့သာ။ ။ မရှုလစ်-လူ့ဖြစ်ဟာကို၊ ဥပေက္ခာ ပယ်ကန့်လို့။ နယ်အပြန့် ပြည်သီဝံ၊ မြန်းဖို့ စိတ်ညွှန်။ အ၀ိဇ္ဇာ့ တဏှာဝန်ကို၊ မဟာမွန် ပယ်ကြောင်းကွဲ့လေး။
မုလေးရုံ တောမှာ၊ ဒေါနလမ်း မြေညီ။ လျှောကျစမ်းရေသင်းချီတယ်၊ ရွှေနှင်းဆီကန်ချောင်း။ လွမ်းမတတ် စကားဝါဂူမှာ၊ နံ့သာဖြူ လေးမောင့် စံကျောင်း။ ။ စပယ်ချပ် သရဖီချောင်မှာ၊ ခွါညိုတောင် ခိုအောင်း။ မွှေးနံ့သာ စုပေါင်း၊ နုညောင်စောင်းထက်မှာ။ ပဒုမ္မာကြာသင်္ကန်း၊ ခါဆင်မြန်း တော်မွေ့ပျော်ရာ။ ။ ပန်းသော်က တံတိုင်းကာတယ်၊ ဇီဇ၀ါမုတ်ခြားလို့၊ တံခါးက ချယားကြိုင်၊ သင်းတဲ့ ဂနိုင်။ ယုဇန မဟာမြိုင်မှာ၊ ကမ္ဘာတိုင် မှီးမယ်ပလေး။
၀တ်ကြောင်ကို လွတ်အောင်ရုန်းပါလို့၊ ထွတ်ခေါင်ဘုန်းစံရာ။ မမွေ့လို့ ယနေ့ခွါမယ်၊ မမေ့ပါတရား။ သင်္ခါရဖြစ်ပျက်ပုံကို၊ နှစ်သက်ပုံ ဝေးတဲ့စိတ်ထား။ ။ တောင်ထူးတဲ့ ချောင်ဦးသာမှာ၊ နောင်ကူးရာမမှား။ ဗြဟ္မစိုရ် ပိုပွါးလို့၊ ကိုယ်တရားကျင့်ညီ။ ဖန်လျှော်တေ ၀တ်လဲနှင့်၊ ကျွတ်ပွဲကို လှမ်းမဲ့ဝသီ။ ။ မောင်ဆင်သ-တဲ့ လှနှင်းဆီငယ်၊ စိတ်တူညီ မယ်လွှတ်ပ။ နောင်ကျွတ်ဖို့ တကိုယ်ရေ၊ မြန်းမယ်ပ-လေ။ ကမ္မဋ္ဌာန်းနှင့် မဂ်လမ်းခြွေမယ်၊ စက်ခန်းရဝေ စံရစ်ရှာတော့လေး။
ဘော်မမှီ ဇော်ဂီလေ့၊ မျှော်ရည်၍ သိက္ခာ။ တော်ကြည်မွေ့ရိပ်သာမှာ၊ အ၀ိဇ္ဇာ မသန်း။ လိုဏ်နန္ဒ ချောင်ကေငူဝယ်၊ တောင်ဝေပူ ဆိတ်ငြိမ်တဲ့လမ်း။ ။ ပုတီးနှင့် အငြီးဖြေမယ်၊ သစ်သီးချွေဆွတ်လှမ်း။ နည်းထွေထွေ ၀ဋ်ခန်းက၊ ကျွတ်တန်းကို ရည်ရွယ်။ မှန်မသွေ ဆံခွေရစ်ပါလို့၊ ဖန်ရေသစ် လဲပါတော့မယ်။ ။ နောင်ကူးဖို့ သောင်ထူးကို ရွယ်တယ်၊ ဖောင်မှူးမယ် ဉာဏ်ဇောနှင့်၊ မှန်နှောတဲ့ သံယောဇဉ်၊ သောကမယှဉ်။ မက်လောဘ မမွေ့ချင်တယ်၊ ယနေ့ပင် မြန်းမယ်ပလေး။
ဒီတပတ်တော့ ဒီလောက်ပါပဲ။ ရှေ့တပတ်မှာ ကဗျာ့ဥပဒေသခန်းက “ဒေါသ” အကြောင်းတွေနဲ့ သံဝေဂကဗျာခန်းက အချုပ်တန်းဆရာဖေရဲ့ သံဝေဂ တေးထပ်များကို ဆက်လက်တင်ပေးပါမယ်ရှင်။
၁၄၊ သြဂုတ်၊ ၂၀၀၉
Posted by မေဓာဝီ at 1:33 PM9comments
လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်နီးနီး ဘလော့ရေးခါစက တင်ခဲ့ဖူးတဲ့ အဖေ့ကဗျာလေးတပုဒ်ပါ။ အခုအချိန်မှာ အဲဒီကဗျာလေး သတိရမိတာနဲ့ ရှာပြီး ပြန်တင်လိုက်ပါတယ်။ တရုတ်စာရေးဆရာ လူရွှန်းရဲ့ ကဗျာကို ဘာသာပြန်ပြီး ရေးတဲ့ကဗျာလို့ အဖေပြောပြဖူးပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ တင်ခဲ့ဖူးတယ်။
Posted by မေဓာဝီ at 3:27 PM4comments
Posted by မေဓာဝီ at 12:41 PM3comments
မင်းတို့သည် တရားသဖြင့် အုပ်ချုပ်ခြင်း မရှိကြကုန်။
သတ္တ၀ါတို့သည် အချင်းချင်း ကြီးနိုင်ငယ်ညှဉ်း နှိပ်စက်ကြကုန်၏။
စစ်လက်နက်တို့ တိုးတက်ဖြစ်ထွန်း၍ ခိုက်ရန် စစ်မက် အချင်းချင်း သတ်ဖြတ် ကြကုန်၏။
မိုးတို့သည် အခါမဟုတ် သည်းထန်စွာ ရွာသွန်းကုန်၏။
ရွာချိန်သင့်ရာ အခါကာလ၌ မရွာသွန်းလတ် မိုးခေါင်တတ်ကုန်၏။
မြေတို့သည် အဆီအနှစ် မဖြစ်မထွန်း ခမ်းခြောက်လွန်းကာ သီးနှံရိက္ခာ ရှားပါးကြကုန်၏။
သတ္တ၀ါများမှာ ရောဂါဘယ ထူပြောလှလျက် သက်တမ်းမစေ့မီ ကြွေလွင့်ကြကုန်၏။
သူတော်ကောင်းတို့ တိမ်မြုပ် သူယုတ်တို့သာ ထင်ပေါ်ကြကုန်၏။
မကောင်းသူပယ် ကောင်းသူကယ်သော လောကပါလာ ဒေ၀တာတို့ ဥပေက္ခာပြု လစ်လျူရှုကြကုန်၏။
၀သုနြေ္ဒ ကမ္ဘာမြေကြီးသည် နာကျည်းငိုရှိုက် သည်းခိုက်စွာ တုန်လှုပ် လေကုန်တော့ သတည်း။
၁၁၊ သြဂုတ်၊ ၂၀၀၉
Posted by မေဓာဝီ at 12:05 PM7comments
Posted by မေဓာဝီ at 12:34 PM6comments
ပျင်းရိဖွယ် ရှည်လျားလှသော နွေရာသီတခု၏ နံနက်ခင်းသည် သူ့ဘ၀ထဲသို့ ဖျင်အင်္ကျီလေး ရောက်လာခြင်း၏ နိဒါန်းဟု ဆိုရပေမည်။ ထိုနေ့ နံနက်က အညာမှ ဆွေမျိုးတစု သူတို့အိမ်ကို အလည်အပတ် ရောက်လာကြသည်။ ပဲကလေး နှမ်းကလေး၊ အညာအစားအစာများနှင့်အတူ ဖျင်စလေး နှစ်စ အမေ့ကို လက်ဆောင်ပေးသည်။ ချည်ထည် အ၀တ်အစားများ နှစ်ခြိုက်တတ်သော သူ့အား အမေက ဒီဖျင်စလေး နှစ်စ ပြန်လည်ပေးခဲ့လေသည်။ မီးခိုး အပြာ အညို အဖြူ အကွက် သေးသေးလေးများ ရောယှက် ယက်လုပ်ထားသော အနံသေး ဖျင်ကြမ်းစ လေးကို ကြည့်ပြီး သူသဘောကျခဲ့မိ၏။
ဖျင်စလေးကို ဘယ်လို အင်္ကျီချုပ်ရမလဲဟု သူစဉ်းစားနေမိသည်။ နောက်ဆုံး အမေတို့ ချုပ်နေကျ အပ်ချုပ်သည်ကြီးဆီကို သွား၍ ဖျင်စလေး နှစ်စကို အဆင်ပြေသလို ကြည့်ချုပ်ပေးပါ ဟု အပ်ခဲ့လိုက်သည်။
အပ်ချုပ်သည်ကြီးဆီ အပ်လိုက်ပြီး နောက်ပိုင်း ဖျင်စလေးက သူ့ထံသို့ အင်္ကျီအဖြစ်ဖြင့် တော်တော်နှင့် ရောက်မလာခဲ့။ သူလဲ ကြာလာတော့ မေ့မေ့ ပျောက်ပျောက် ဖြစ်သွားပြန်လေသည်။ ဒီလိုနှင့် နွေကျောင်းပိတ်ရက်ရှည် ကုန်ဆုံးပြီး မိုးရာသီ အပြောင်း ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်သည့် ညနေခင်းတခုမှာ အပ်ချုပ်သည်ကြီးထံမှ ဖျင်အင်္ကျီလေး ချုပ်ပြီးပြီဟု ဖုန်းလာသည်။
အပ်ချုပ်သည်ကြီးက ဖျင်ကြမ်းစကလေးနှစ်စကို နှစ်နံစပ်၍ အပေါ်ထပ် ၀တ်သော ကုတ်အင်္ကျီပုံစံ ချုပ်ပေးထား၏။ ကော်လာချိုးပုံ၊ အိတ်ထည့်ပုံ၊ ကြယ်သီးနှင့် ကြယ်သီးပေါက် ဖောက်ပုံတွေက သေသပ်ကျနသည်။ လက်ဆောင်အဖြစ် အလကားရသော ဖျင်စကလေး၏ ချုပ်ခက ထိုခေတ်နှင့်ဆို သိပ်မနည်းလှ။ ဖျင်ကြမ်းစကို ဈေးကြီးပေး ချုပ်ရကောင်းလားဟု အိမ်သား တချို့က စကားတင်း ဆိုကြသည်။ တကယ်တော့လဲ ငွေကြေးအားဖြင့် အဖိုးအခများစွာ မပေးရသည့် တိုင် မိမိနှစ်သက်လျှင် အဖိုးတန်သည်ပင် မဟုတ်လား။ တစုံတရာ၏ တန်ဖိုးသည် ငွေကြေးဖြင့် ပိုင်းဖြတ်၍ မရစကောင်း၊ တန်ဖိုးထားသူ ပေါ်၌သာ မူတည်သည်ဟု သူကတော့ ယူဆထားပါ၏။
ဤသို့ဖြင့် အကြမ်းခံပြီး မြန်မာပြည်၏ ရာသီဥတုတိုင်းနှင့် သင့်တော်သည့် ဖျင်ကြမ်းအင်္ကျီလေးက ချုပ်ရိုးချုပ်သား ကောင်းမွန် သေသပ်သော လက်ရာဖြင့် သူ့လက်ထဲသို့ ရောက်လာလေသည်။
ဖျင်အင်္ကျီလေးကို မိုးဖွဲဖွဲရွာနေသည့် နံနက်ခင်း တခုမှာ ရင်ဖုံးအင်္ကျီ အဖြူရောင် ကျောင်းဝတ်စုံ၏ အပေါ်မှ ထပ်၍ ၀တ်ဆင်သွားဖြစ်သည်။ သိုးမွှေး၊ ယုန်မွှေး၊ ထရိုင်ဆဲလ် စသော အဖိုးတန် အရောင်စုံ အသွေးစုံ အနွေးထည်များကြားတွင် ထိုဖျင်ကြမ်းအင်္ကျီလေးက လှပ ထည်ဝါမှု မရှိလှ။ သို့ပေမဲ့ အကြမ်းခံ၊ အလျှော်ခံ၊ အညစ်အပေခံ၊ ပြည်တွင်းဖြစ် ထိုချည်ကြမ်းကလေးကို သူမက်မောစွာ နေ့စဉ် ရက်ဆက် ၀တ်ဆင်ခဲ့ပါ၏။
ဖျင်အင်္ကျီလေး စ၀တ်သောနေ့သည် သူငယ်ချင်း အသစ်တယောက် ရသောနေ့ လည်း ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုသူက ရဲထွတ်။ ရဲထွတ်က အတန်းထဲမှာ စာသိပ်မတော်လှ။ အသားညိုညို၊ မျက်နှာရှုတည်တည်၊ လူကောင်သေးသေး၊ ဆံပင်က ကတုံး ဆံတောက်။ အပေါင်းအသင်းလဲ သိပ်မရှိ၊ သူ့လိုပင် ဒီနှစ်မှ ပြောင်းလာသော ကျောင်းသားတဦးဖြစ်၏။
“နင်မနေ့က ကျောင်းတက်လား …”
“အေး တက်တယ်လေ ဘာလို့လဲ နင်မတက်ဘူးလား”
“အေး … ငါ့ကို မြန်မာစာ စာအုပ် ခဏငှားစမ်းပါဟာ … မနေ့က ငါ ကျောင်းမတက်လို့”
“မြင့်မြင့်သန်းတို့ဆီက ငှားပါလား … ငါလဲ စာသိပ်မစုံဘူးဟ”
“အာ … သူတို့ဆီက မငှားချင်ဘူး … ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နိုင်လွန်းလို့ … စာမစုံလဲ ကိစ္စ မရှိဘူး မနေ့က တနေ့စာ ရရင်တော်ပြီ”
သူငယ်ချင်းများများ မရှိသောသူနှင့် ရဲထွတ် ခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့သည်။ ဒီနောက်ပိုင်း ရက်ပိုင်းတွေသည် သူ့ဘ၀အတွက် မမေ့နိုင်စရာ နေ့ရက်များ ဖြစ်သည်။ သူ၏ ဒိုင်ယာရီ စာမျက်နှာများပေါ်တွင် မင်နီဖြင့် ရေးမှတ်ခဲ့ရသော နေ့ရက်များလည်း ဖြစ်သည်။ ထိုရက်တွေမှာ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေသည် စာသင်ကြားမှုကို စိတ်ပါဝင်စားခြင်း အလျဉ်းမရှိကြ။ တစုံတရာကို ဆွေးနွေးကြ၊ ပြောဆိုကြ၊ တိုင်ပင်ကြ၊ တခါတလေ ငြင်းခုန်ကြ။ မည်သို့ပင် ဖြစ်စေ အားလုံးတူညီနေသည့် အချက် ကတော့ သူတို့အားလုံး တက်ကြွနေကြသည်။ ရင်ထဲမှာ မျှော်လင့်ချက် အားမာန်တွေ ပြည့်လွှမ်းနေကြသည်။ ဆရာ၊ ဆရာမတွေသည်ပင် သူတို့ကို အားပေး အားမြှောက် မပြောသာဘဲ အန္တရာယ် ဖြစ်မှာစိုး၍ အနည်းငယ် တားမြစ် သယောင် ပြုကြသည့်တိုင် စိတ်ထဲက ကြိတ်၍ ထောက်ခံနေကြသည်။
တရက်တော့ စာသင်ချိန် တချိန်အပြောင်း ခေါင်းလောင်းထိုးစဉ်မှာ ကျောင်းသား တစု သူတို့ စာသင်ခန်းအပြင်ကို ရောက်လာကြသည်။ လက်မှာ အနီရောင် လက်ပတ်တွေနှင့်။ တချို့က ခေါင်းမှာ ပုဝါနီတွေ ချည်ထားသည်။ သူတို့က စာသင်ခန်း ပြတင်းပေါက်အပြင်မှာ ရပ်ကာ စကားအနည်းငယ် ပြောသည်။ သူတို့ စကားတွေကို နားထောင်ရင်း ကြက်သီးများ ထမိသည်၊ ရင်တွေ တထိတ်ထိတ် ခုန်လာသည်၊ ခန္ဓာကိုယ်မှာ လည်ပတ် နေသော သွေးတွေ ပူနွေးလာသည်။ ကျောင်းသူတချို့က မျက်ရည်ကျကြသည်။ တချို့က ထိုင်ရာမှ ထကြပြီး လိုက်သွားကြသည်။ တချို့က လက်ကိုင်ပုဝါတွေ မုန့်တွေပေးသည်။ နောက်ပြီး တော့ ပိုက်ဆံတွေ။
သူတို့ကို ကြောင်ငေးကြည့်နေစဉ် ရဲထွတ်က သူ့ရှေ့၌လာရပ်ပြီး
“ငါ လိုက်သွားလိုက်ဦးမယ်” ဟု ပြောသည်။ အမြဲ မှုန်တေတေ နေတတ်သော သူ့မျက်နှာက ဒီတခါတော့ သွေးကြွနေသည်လား မပြောတတ်။ အပြင်မှာ မိုးတွေ ဖွဲရာမှ တစတစ သည်းလို့ လာနေပြီ။
“ဟဲ့ နေဦး …”
ရဲထွတ်က ဘာလဲဟူသောမျက်နှာဖြင့် ခပ်လောလော စိတ်မရှည်ဟန်ကြည့်သည်။ “ရော့”
ကုလားထိုင်နောက်မှီမှာ ချိတ်ထားသည့် ဖျင်အင်္ကျီလေးကို ဖြုတ်ပြီး ပေးလိုက် သည်။
“အပြင်မှာ မိုးရွာနေတယ်၊ နင့်မှာထီးမပါဘူးမဟုတ်လား၊ ဒီအင်္ကျီယူသွား”
ရဲထွတ်က မငြင်း၊ အင်္ကျီလေးကို ခေါင်းမှာအုပ်ပြီး ခပ်သုတ်သုတ် ပြေးရင်း ထွက်သွားသော ကျောင်းသားစုနောက် လိုက်သွားလေတော့သည်။ တော်ရုံတန်ရုံ မိုးလောက်တော့ ထိုဖျင်အင်္ကျီလေးက အကာအကွယ် ပေးနိုင်မည်ဟု သူ ယုံကြည်ခဲ့ပါသည်။
ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ ဖျင်အင်္ကျီလေးနှင့်အတူ ရဲထွတ်ကို ပြန်မတွေ့ရတော့ချေ။ သို့ဖြင့် … ကျောင်းမသွားရတော့သည့် နေ့ရက်များမှာ ဟိုနေရာ ဒီနေရာက ဟောပြောပွဲတွေ လိုက်နားထောင် လက်ခုပ်တီး၊ တစုတဝေးထဲ အစားမစားဘဲ တိုက်ပွဲဝင်နေသူများကို သွားအားပေး၊ သတင်းတွေ နားထောင်၊ စိတ်က တက်လိုက် ကျလိုက် … မငြိမ်သက်။ စိတ်မကောင်းစရာ … ဒေါသဖြစ်စရာ သတင်းတွေ ကြားရသည်က နားနှင့်မဆန့်။
သူ … ဘာလုပ်ရမလဲ။ စဉ်းစားရင်း တွေဝေနေမိ၏။ တရက်တော့ သူ့ဆီ ဖုန်းလာသည်။ သူငယ်ချင်း တယောက်ထံမှ။
“ငါတို့ အဲဒီလို စီစဉ်ထားတယ်၊ နင်ရော ဘယ်လိုသဘောရလဲ၊ ဘယ်သူမှတော့ မသိစေနဲ့ဟ၊ တကယ်လို့ နင်လိုက်ချင်ရင် ++++++++++++ ”
စိတ်လှုပ်ရှားလွန်း၍ လူက ကတုန်ကယင် ဖြစ်နေသလို။ လူကြီးတွေရှေ့မှာ ဟန်မပျက်အောင် နေရင်း ညတညကို ကုန်လွန်ခဲ့ရသည်။ နောက်တနေ့နံနက် လူကြီးတွေ မနိုးခင် အသာလေးထ၊ မျက်နှာသစ်၊ အ၀တ်အစားလဲပြီး ညက အသင့်ပြင်ထားသော လွယ်အိတ်ကို ယူလိုက်သည်။ လွယ်အိတ်ထဲမှာက သေသေသပ်သပ် ပြားနေအောင် ခေါက်ထားသော အင်္ကျီလုံချည် တစုံ၊ ပိုက်ဆံ အနည်းငယ်ပါသော သားရေအိတ် အပြားလေးတခု၊ မွှေးပွ လက်ကိုင်ပုဝါလေး တထည်။
လွယ်အိတ်ကြိုးကို ခေါက်တုံ့ချည်ထုံးပြီး စလွယ်သိုင်းအပြီးမှာတော့ ထွက်ခွါရန် အသင့်ဖြစ်ပြီ။ နောက်ဖေးတံခါးကို အသာဖွင့်ထွက်ပြီး အိမ်ဘေးလမ်းကြား ဘက်ကို သွားလိုက်သည်။ အိမ်ရှေ့ဝင်း တံခါးမှ ထွက်လျှင် အိမ်ကလူတွေ သိနိုင်တာမို့ လမ်းကြားထဲကနေ ခြံစည်းရိုး သံဆူးကြိုးကို လူတယောက် ထွက်သာအောင် ဟလိုက်ပြီး လေးဘက် ထောက် တွားသွား ထွက်ရင်း တဘက်ခြံထဲကို ၀င်လိုက်၏။ ထိုခြံက လူအများနေတာမို့ ၀င်းတံခါးမရှိ၊ ခပ်သုတ်သုတ် လျှောက်ရင်း အပြင်လမ်းမပေါ် ရောက်သွားစဉ်မှာ စိတ်ပေါ့ပါး လွတ်လပ်သွားသလို ခံစားလိုက်ရသည်။ တကယ်တမ်း သွားရမည့် လမ်းက အိမ်ရှေ့က ပြန်ဖြတ်ရဦးမည်။
သွားစရာ တခြားလမ်းကို မတွေးမိဘဲ အိမ်ရှေ့မှ ဖြတ်ရမည့် လမ်းကို ရွေးခဲ့ခြင်းက သူ့အတွက် ကံကောင်းသည်လား ကံဆိုးသည်လား … သူခုချိန်ထိ ဝေခွဲမရခဲ့ပါ။ ဘာကြောင့်ဆိုတော့ အိမ်ရှေ့မှ ပြန်အဖြတ်မှာ အိမ်က ကောင်မလေးတယောက် သူ့အား မြင်သွား၍ ဖြစ်သည်။
“ဟိုမှာ ဟိုမှာ … ထွက်သွားပြီ…”
လမ်းလျှောက်နှုန်းကို မြှင့်လိုက်သည်။ စကားသံဝဲ၀ဲဖြင့် ပြောသော ထိုမိန်းကလေး အသံက နောက်မှာ ကျန်ခဲ့လေ၏။ လမ်းမကြီးအတိုင်း မသွားဘဲ လမ်းကျဉ်းတခု ကို ရွေးလိုက်သည်။ ထိုလမ်းထဲမှာ ဖြတ်လမ်းလေးတခု ရှိသည်၊ ထိုဖြတ်လမ်းမှ နေပြီး တဘက် လမ်းမကြီးဘက် ပေါက်အောင် သွားမည် … စသဖြင့် တွေးရင်း လမ်းကျဉ်းထဲသို့ ခပ်သုတ်သုတ် လျှောက်လိုက်၏။
ရှေ့တူရူမှ လာသော စက်ဘီးကို ရှောင်ရင်း လမ်းတဘက်သို့ ဖြတ်ကူးသည်။ လမ်းကျဉ်းကလေးက ကားအသွားအလာနည်းသလို လူလည်း ပြတ်လှသည်။ အပြေးတပိုင်း လျှောက်နေရင်းက ထိုလမ်း၏ ညာဘက်ခြမ်းက ဖြတ်လမ်းသွယ် လေးထဲ ချိုးဝင်လိုက်၏။ လမ်းသွယ်လေးဆုံးလျှင် လမ်းမကြီးဆီ ရောက်ပြီ။
လမ်းသွယ်လေး၏ အလယ်တည့်တည့် လောက်ဆီမှာ ၀ါးကပ်များဖြင့် ကာရံ ပိတ်ပင်ထားလေသည်။ ထိုစဉ်က လုံခြုံရေးအရ လမ်းတွေကို ထိုကဲ့သို့ ပိတ်ထားလေ့ရှိသည်။ အဲဒါမှ ဒုက္ခ။ ၀ါးကပ်ကြားက တိုးပြီး သွား၍ ရလိုရငြား ကြိုးစားကြည့်ပေမဲ့ အချည်းနှီးပင်။ မည်သို့မှ မတတ်နိုင်သည့်အဆုံး နောက်ပြန် လှည့်ရလေတော့သည်။
လမ်းသွယ်လေးမဆုံးခင်မှာ အရိပ်တခု လမ်းထဲဝင်လာသည်ကို ဖျတ်ခနဲ မြင်လိုက်ရ၍ ချုံပုတ်လေးနားကပ်ကာ ခိုလိုက်သော်လည်း နောက်ကျသွားခဲ့ပြီ။ ထိုအရိပ်က သူရှိရာ ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက် ရောက်လာလေ၏။
အမကြီး၏ ဒေါသသံ၊ ပြီးတော့ လက်ကောက်ဝတ်ကို အတင်းညှစ်၍ ဆောင့်ဆွဲပြီး ခေါ်သွားသည့်နောက် မရုန်းသာ မငြင်းသာဘဲ ယက်ကန်ယက်ကန် ပါသွားလေ တော့သည်။ အိမ်ရောက်တော့ အမေက တုတ်တချောင်းနှင့် အသင့်စောင့်နေ သည်။
“နင့်ကိုယ်နင် ဘာထင်နေလဲ … နှမ်းတလုံးနဲ့ ဆီမဖြစ်ဘူး ဟဲ့ …”
အိမ်နောက်ဖေး မန်ကျည်းပင်ကြီးအောက်မှာ အမေရိုက်သည့် တုတ်ချက်များကို မျက်ရည်မကျဘဲ ပေခံရင်း သူ့နှလုံးသားတွေ တဆစ်ဆစ် နာကျင်ခဲ့ရပါသည်။
အချိန်တွေ တရွေ့ရွေ့ကုန်ဆုံးခဲ့သလို အခြေအနေတွေလဲ တစတစ ပြောင်းလဲ ခဲ့သည်။ အရာရာ ပုံမှန်ပြန်၍ လည်ပတ်နေကြပေမဲ့ ပုံမှန်ပြန်မဖြစ်သည့် ဘ၀တွေက တပုံတပင်။ သူ့ထံ ဖုန်းဆက်သွယ်သော သူငယ်ချင်းနှင့် ရဲထွတ်တို့ သတင်းလဲ အစအနပင်မရ။ သူတို့ ဘယ်ရောက်နေကြပါလိမ့် ကြုံတိုင်း လက်လှမ်းမီသလောက်တော့ စုံစမ်းနေမိဆဲ။ ရုပ်မြင်သံကြားသတင်းထဲမှာ အမိမြေကို ပြန်လည်ခိုလှုံလာသည့် သတင်းတွေ လာတိုင်း သူတို့ပါလာလိမ့်နိုး ရှာမိသေးသည်။
တရက်တော့ သူ့ဆရာတယောက်ထံမှ ဖုန်းလာသည်။
“သမီး … အားရင်အိမ်လာခဲ့အုံး”
ဆရာ့အိမ်က မြို့သစ်ရပ်ကွက် တခုမှာဖြစ်သည်။ သူရောက်သွားတော့ ဆရာက လူစိမ်းတယောက် နှင့် ရေနွေးကြမ်း သောက်ရင်း စကားပြောနေကြသည်။ ဆရာက သူနှင့်မိတ်ဆက်ပေးရင်း ခပ်တိုတိုပင် ပြော၏။
“သမီးသူငယ်ချင်း ရဲထွတ်အကြောင်း ပြောမလို့”
“ဟယ် … ရဲထွတ်နဲ့ တွေ့ခဲ့လား … သူအဆင်ပြေလား၊ ခု ဘယ်မှာလဲ … ပြန်လာပြီလားဟင်”
အားတက်သရော ဆက်တိုက်မေးသော သူ့ကို ထိုလူက တွေတွေကြည့် နေသည်။ ဘာမှမပြော။ ဆရာကပဲ …
“စိတ်မကောင်းတော့ မဖြစ်နဲ့ သမီး၊ ရဲထွတ် ဆုံးသွားပြီ”
သူ မှင်သက်သွားသည်။ ထိုလူစိမ်း ဆက်ပြောနေသံတွေကို သူ မကြား၊ ဘာကိုမှလဲ မမြင်မိတော့။
ဘ၀တွေက ဘာလို့ မတည်မြဲကြတာလဲ …
တိုတောင်းလိုက်တဲ့ ဘ၀တွေရယ် … ။
ရိုးပြတ်တွေ ထိုးထိုးထောင်ထောင် ဖြစ်နေသော ပက်ကြားအက် လယ်ကွင်းကို ဖြတ်၍ လေပူတချက် ဝှေ့ကာတိုက်သည်။ ကောက်မော့လိုက်မိသော ရေနွေးကြမ်း ပူပူက လည်ချောင်းထဲသို့ ပူလောင်ခါးသက်စွာ စီးဆင်းသွား၏။ အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်၊ အနာဂတ် … ကာလသုံးပါးဟာ ယုံကြည် မျှော်လင့်စရာလဲ မကောင်းပါလား။
“ဒါ … ရဲထွတ် ကျန်ခဲ့တာလေးပါ၊ သူအမြဲပြောတယ် ပိုင်ရှင်ကို ပြန်ပေးရဦးမယ် … တဲ့”
အပြာရောင်ဂျင်းကျောပိုးအိတ် ခပ်နွမ်းနွမ်းထဲမှ စက္ကူဖြင့် ပတ်ထားသော တစုံတခုကို ယူကာ သူ့ရှေ့မှာချသည်။ ပတ်ထားသည့် စက္ကူကို ဖြည်လိုက်တော့ …
ဟုတ်သည်။ သူ၏ ဖျင်ကြမ်းအင်္ကျီကလေး …. …. …. ။
ထိုအချိန်မှစ၍ ဖျင်ကြမ်းအင်္ကျီလေးကို သူမ၀တ်ဖြစ်တော့။ ဒီအင်္ကျီလေးကို မြင်တိုင်း ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကြားမှာ အသက်ပေးသွားကြသည့် လူမသိ သူမသိ ဘ၀တွေအတွက် ၀မ်းနည်းမိသည်။ နှမျောမိသည်။ ဘာမှမစွမ်းဆောင်နိုင်သော သူ့ဘ၀သူတော့ ရှက်ရွံ့မိပါသည်။
နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာသည့်တိုင် ဖျင်အင်္ကျီလေးက အ၀တ် ဘီရို၏ တနေရာမှာ ငြိမ်သက်စွာ ရှိနေခဲ့သည်။ များမြောင်လှသော လူမှုကိစ္စတွေကြားမှာ ရုန်းကန် ရှင်သန်ရင်း ဖျင်အင်္ကျီလေးကို မေ့မေ့လျော့လျော့လဲရှိနေခဲ့သည်။ သွေးကြောင် လှသော သူက ဖျင်အင်္ကျီလေးကို ကြည့်ရမှာ စိတ်မလုံလဲ။ မှတ်မှတ်ရရ ၂၀၀၇ ခုနှစ်၏ နေ့တနေ့မှာတော့ ဘီရိုထဲက ဒီအင်္ကျီလေးကို ပြန်ထုတ်၍ ၀တ်ခဲ့မိသည်။ ကျဆုံးသွားသော သူငယ်ချင်း၏ ၀ိညာဉ်တွေ ကပ်ငြိနေဆဲလား၊ သွေးတွေ ပူနွေးကာ သူစိတ်ဓာတ် တွေ တက်ကြွလာခဲ့၏။
ဒီနောက်မှာတော့ ဒိုင်ယာရီထဲ ကမ္ပည်းထိုးခဲ့ရသည့် မမေ့နိုင်သော စက်တင်ဘာ နေ့စွဲများ။ ခါးသီးသော နေ့ရက်များ။ ဆိုးရွားသော ဖြစ်စဉ်များ … ဆက်တိုက် ကြုံတွေ့ရပြီးနောက် အားလုံးကို ခွဲခွါရမည့် အချိန်သို့ရောက်လာခဲ့လေသည်။
အ၀တ်အစားအိတ်ပြင်တော့ အမေက လာကြည့်ရင်း
“ဟဲ့ ဒီအင်္ကျီအဟောင်းကြီး ယူသွားမလို့လား” ဟုမေးသည်။
“ဟောင်းပေမဲ့ ကောင်းပါသေးတယ် အမေ”
ဒီနိုင်ငံ၏ ရာသီက ဖျင်အင်္ကျီဖြင့် မခံသာ။ ခိုက်ခိုက်တုန်အောင် ချမ်းအေးသော ဆောင်းဥတု နေ့ရက်များ၊ ကြမ်းတမ်းစွာ တိုက်ခတ်သော ရေခဲတမျှ အေးစက်သည့် လေရိုင်းများ၊ စိုစွတ် ချမ်းအေးသော မိုးစက် မိုးပေါက်များ၏ ဒဏ်ကို ပြည်တွင်းဖြစ် ချည်ကြမ်း ဖျင်အင်္ကျီလေးဖြင့် ခုခံကာကွယ်နိုင်ပါ့မလား။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ရောက်ရှိနေသော ဒေသနှင့် လျော်ညီသည့် အနွေးထည် အထပ်ထပ်ကို ကျပ်တည်းစွာ ၀တ်ဆင်ရင်း ဖျင်အင်္ကျီကလေးအား ပြန်လည် ၀တ်ဆင်နိုင်မည့် နေ့ရက်များကို မျှော်လင့်နေမိ ပါတော့သည်။
၈၊ သြဂုတ်၊ ၂၀၀၉
Posted by မေဓာဝီ at 7:10 AM 12 comments
ဒီတပတ် အပိုင်း (၅) မှာ တင်မယ့် သံဝေဂ ကဗျာခန်းမှာ ရှင်မဟာသီလ၀ံသ ရေးသားတော်မူတဲ့ သံဝေဂပိုဒ်စုံရတုကို ဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ သံဝေဂရတု မဖော်ပြခင် ကဗျာ့ဥပဒေ ခန်းမှာပါတဲ့ ကဗျာ၊ လင်္ကာ၊ ပျို့၊ ဂါထာ .. စတဲ့ ဝေါဟာရတွေ အကြောင်း ရှင်းပြထားချက်ကို ဦးစွာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဤသို့ က၀ိပုဂ္ဂိုလ်၊ ပြုလုပ်လိုသူတို့၏၊ ထုတ်ဆိုသော အင်္ဂါအများတို့တွင် ရှေးဖျား-ကဗျာဟူသော ဝေါဟာရ, ဂန္ဓဟူသော ဝေါဟာရ၊ ဤသို့ စသဖြင့် မာဂဓမှ မြန်မာဖြစ်ခြင်း၊ မြစ်အရင်းများကို၊ သစ်လင်းသိစေကြရမည်ဟူသော က၀ိလက္ခဏာ၊ မာတိကာ၌၊ ကဗျာစသည်တို့၏ ဝေါဟာရကား-
“က၀ီနံ ဣဒံ ကဗျံ” ဟူသော သီလက္ခန် ဋီကာနှင့်အညီ စိန္တာသုတ၊ အတ္ထပဋိဘာန်၊ အသိသန်တော်မူကြသော၊ က၀ိခံပုဂ္ဂိုလ် ၄-ဦးတို့၏၊ ထူးမြတ်သောဥစ္စာ၊ အဆိုအမိန့်, နှစ်သိမ့်ဖွယ်သော သဒ္ဒပဗန္ဓ အစဉ်အလာကို ကဗျာဟု ခေါ်ဝေါ်ကြောင်း။
၎င်းကဗျာကို “နာနာဘေဒဘိန္နာ ဂီယန္တိ ဥစ္စာရီယန္တိ ဧတ္ထ ဧတေနာတိ ၀ါ ဂေါ၊ နာနာအတ္ထံ ဓာရေတီတိ ဓော၊ ဂေါစ သောဓေါစာတိ ဂန္ဓော” ဟု ၀စနတ် လှစ်ကြူးရကား၊ အထူးထူးအပြားပြားသော သဒ္ဒါတို့ကို ဆိုရာဆိုကြောင်း ဖြစ်၍ အထူးထူးသော အနက်ကို ဆောင်တတ်သောကြောင့် ဂန္ဓခေါ်ဆိုသည်။
ထိုဂန္ဓ အမည်ရှိသည်ကိုလည်း “က၀ီဟိ ဗန္ဓိတဗ္ဗောတိ ဗန္ဓော” ဟူသော ၀စနတ်နှင့်အညီ လေးရပ်သော က၀ိတို့၊ မဏိမုတ္တာ၊ ရတနာရွဲလုံး၊ ပုလဲပြုံးကို၊ တလုံးစီ ရွှေကြိုးသီသကဲ့သို့၊ ကုံးစီဖွဲ့ဆိုအပ်သော သဘာဝ ဗန္ဓဟု အမည်ရ ပြန်သည်။
ထိုဗန္ဓကား ဂါထာ, စုဏ္ဏိယ, ၀ိမိဿ ဟု ၃-ဌာန ပြားချေ၏၊ ထိုသုံးပါးအနက် -
အက္ခရာ, ဂိုဏ်း, ဂရု, လဟု တို့ကို မှတ်၍ ဖွဲ့အပ်သော ဗန္ဓကို ဂါထာဟု ခေါ်ဆိုသည်။
အက္ခရာ, ဂိုဏ်း, ဂရု, လဟု တို့ကို မမှတ်မူ၍ ဖွဲ့အပ်သော ဗန္ဓကို စုဏ္ဏိယ ဟု ခေါ်ဆိုသည်။
ထိုနှစ်ပါးစုံကို ရောနှော၍ ဖွဲ့အပ်သော ဗန္ဓကို ၀ိမိဿဟု ခေါ်ဆိုသည်။
ထို ဂါထာ, စုဏ္ဏိယ, ၀ိမိဿတို့ကိုပင် “ဒီဃသရေန ဂါယိတဗ္ဗန္တိ ဂီတံ” ဟူသည်နှင့်အညီ ရှည်သောအသံဖြင့် ရင့်ကြူး သီရသောကြောင့် ဂီတဟု သမုတ်ကြောင်း။
၎င်းပြဆိုခဲ့သမျှ ကဗျာစသည်တို့ကိုပင် လောက၀တ်, ဓမ္မ၀တ် ညီညွတ်ပြည့်စုံရန် နားတန်ဆာဆင်တတ်ဟန်ကြောင့် “ကဏ္ဏံ အလင်္ကရော တီတိ လင်္ကာ” ၀စနတ်လာသည့်အတိုင်း လင်္ကာဟု ခေါ်ဝေါ်သမုတ် ကုန်သည်။
ပျို့ ဟူ၍ ခေါ်ဝေါ်ဟန်မှာ “မနံ ပိနေတိ ၀ဎေုတီတိ ပျို့” ဟူသော ၀ိဂြိုဟ်နှင့်အညီ စိတ်ကို နှစ်သက်ပွါးများစေတတ်သောကြောင့် ပျို့ဟူ၍ အမည်ပေးသည်။
ဧချင်းဟု ခေါ်ဝေါ်သမုတ်သည်မှာ “အတ္ထုပ္ပတ္တံ ဣယေတိ ဇနေတီတိ ဧချင်း” ၀စနတ် အကျဉ်းနှင့်အညီ မင်းမိဖုရားတို့ ရင်တော်သွေးများကို ဧယဉ်တော်ဆက် မင်္ဂလာအခါတွင် သမ္ဘာရွှေဘုန်း၊ နေနှုန်းဥက္ကဌ်၊ ဇာတိတော် ထူးမြတ်ကြောင်း မှူးမတ်စာဆိုတော် ပညာရှိတို့က သိသာတော်မူစေခြင်း ရွှေနားတော် သွင်းရသည် ဖြစ်၍ ဧချင်းဟု အမည်ရသည်။
အဲချင်းမှာ နေနတ်ကယ်မှ ရာဇာ စသဖြင့် ရွာတော်ရှင်, မြို့တော်ရှင်, နတ်သခင်တို့ကို လျှောက်တင်ခေါ် တိုင်တန်းသော ပုစ္ဆန်းသည်တို့၏ အရှင်ဟော အာလုပ် အယျသဒ္ဒါကို စွဲ၍ အဲချင်းဟု ခေါ်ဝေါ်သည်။
အန်ချင်းမှာ အဏ္ဏ၀-သဒ္ဒါပျက်၊ တက်ရေးလှေချင်း၊ ရေသဘင်ကျင်းရာ၌၊ မင်းခန်းစီမံ၊ သီဆိုသော အရင်းခံဖြစ်၍၊ အန်ချင်းဟု အမည်ကြားသည်။
လူးတား ခေါ်သည်မှာ ပေါ်လွင်ရှည်လံသော အသံဟော ပ္လုတ သဒ္ဒါတွင် ပ-အက္ခရာကို ဖျောက်၍ ထိုနောက် လ-၌ ဥ-ကို ဦပြုကာ တ-မှာ အာသရ ကပ် ယှဉ်လျက် ယင်းတို့တွင် ၀ိသဇ္ဇနီနှင့် အသံရှည် ရွတ်ဆိုရသောအားဖြင့် လူးတားဟု ခေါ်ဆိုသည်။
ထိုထိုပြဆိုအပ်ခဲ့ပြီးသည်မှ ကြွင်းကျန်သော ရကန်, ရတု, ပိုဒ်စုံ, သတ်ပုံ, သတ်ညွှန်း, မော်ကွန်း, သံပိုင်း, သမိုင်း, ကျောက်စာ အရပ်ရပ် အမည်သညာတို့ကိုလည်း၊ ယထာရဟ၊ အနွတ္ထမည်၊ ရဠှီမည်၊ ဗျုပ္ပတ္တိ အတည်တည်တို့ဖြင့် ကြံစည်ထောက်ရှု ခေါ်ဝေါ်မှည့်ဆိုခြင်း ပြုအပ်ကုန် သတည်း။
ဤသို့လျှင် ကဗျာစသော ဝေါဟာရတို့၏ မာဂဓမှ မြန်မာဖြစ်ခြင်း၊ မြစ်အရင်းများကို သစ်လင်းနားလည်စေရမည် ဟူလိုသည်။
အရညကင်၊ တောသို့ဝင်၍၊ ဓူတင်ရအောင်၊ ရွာကိုရှောင်မှ၊ လေးထောင်ထွာဖြတ်၊ အစွန်းလွတ်သား၊ ကိုင်းညွတ်ကွေးကွေး၊ ကုပ်လုပ်လေးတာ၊ ပြန်ငါးရာဖြင့်၊ သင်္ချာမှန်လှ၊ တကောသ၌၊ နေထကိန်းအောင်း၊ သင်္ခမ်းကျောင်းလည်း၊ ညောင်စောင်းဆန့်ရုံ၊ တစုံသင်္ကန်း၊ ဖန်ရည်စွန်းသား၊ ခါးပန်း, သင်းပိုင်၊ ဓမ္မကရိုင်, ပဲကွပ်၊ သပိတ်, အပ်နှင့်၊ ကိုယ်ဝတ်, ဒုကုဋ်၊ လက်သုတ်ကိုင်သွား၊ ကရား, သားရေနယ်၊ ပခုံးလွယ်၍၊ လေးဆယ်ကမ္မဋ္ဌာန်း၊ ကသိုဏ်းဝန်းလည်း၊ စီးဖြန်းထစ်ထစ်၊ ထွာလေးသစ်ဖြင့်၊ မချစ်ဖော်ရွေ၊ ကိုယ်ထည်းနေမှ၊ ဧကစာရ၊ မာန်စောင်ချလျက်၊ လောဘမစော၊ လူမနှောသည်၊ တတောထွက်လျှင်၊ တတောဝင်၍၊ တပင်ထွက်သွား၊ တပင်နားလျက်၊ ခေါင်းပါးအစာ၊ မျှရုံသာလျှင်၊ ပမာနှိုင်းတု၊ ကြက်ဥထက်မြှောက်၊ ဒေါင်းဥအောက်ဖြင့်၊ ချောက်ချောက်မများ၊ လုပ်ရေစားမှ၊ လေးငါးလုပ်လျှော့၊ ဖျော့တော့ကိုယ်လက်၊ ပစ္စ၀က်လည်း၊ နေ့ရက်အမြဲ၊ သုံးစွဲတိုင်းပင်၊ ရွတ်ဆင်ချင်မှ၊ သုတ်သင်အာပတ်၊ ပရိဝါသ်နှင့်၊ မာနတ်ဘန်သွင်း၊ မကင်းစောင့်စည်း၊ သီလဆည်း၍၊ ပုလလည်းဆင်၊ ကျင့်သောသွင်သို့၊ အောင်မြင်တမ်းခွန်၊ သာမျိုးလွန်သည်။ ။ နိဗ္ဗာန်ရွှေမြို့ ပျော်မည်ဘို့။
မယှဉ်သဘင်၊ စိတ်ကိုသင်၍၊ တောဝင်ပြီပြီ၊ ညရီနံနက်၊ ခပ် တံမြက်နှင့်၊ ကိုယ်လက်ကျန်းအောင်၊ သုံးရေဆောင်၍၊ ညောင်ဗောဓိပင်၊ စေတီပြင်ကို၊ သုတ်သင်လှည်းလျက်၊ ကျောင်းသို့တက်မှ၊ ဓမ္မစကြာ၊ မဟာသမယ၊ မင်္ဂလနှင့်၊ ရတနသုတ်၊ မေတ္တသုတ်က၊ ပေါင်းချုပ်မကွာ၊ ခန္ဓာ မောရ၊ ၀ဋ္ဋသုတ်ပါ၊ ရတနာရွှေချိုင့်၊ တံတိုင့်ပမာ၊ စောင်ရန်းကာလျက်၊ မေတ္တာပြုပြီး၊ ဆွမ်းခံနီးသော်၊ ကြယ်ကြီးနက္ခတ်၊ အခါမှတ်လျက်၊ လွယ်သွတ် သပိတ်၊ မေတ္တာစိတ်ဖြင့်၊ ပရိတ်ရွတ်သွား၊ သင့်ရာနားမှ၊ ခါးပန်းပတ်ရစ်၊ ဒူးပုဆစ်မျှ၊ ရှစ်သစ်ချ၍၊ ၀တ်ထ သင်းပိုင်၊ ထဲပြိုင်ရောရှုတ်၊ ဒုကုဋ် ထိုထက်၊ လေးသစ်တက်မှ၊ နှစ်ဘက်အစွန်း၊ အ၀န်းသပ်သပ်၊ အနားပါတ်လည်း၊ မချွတ်တာရှည်၊ မြဲအောင်ချည်၍၊ လည်လက်ကောက်ဝတ်၊ ဖုံးလွှမ်းပတ်ရစ်၊ အိတ်သွတ်ရေကျင်း၊ မကင်းလက်နှိုက်၊ သပိတ်ပိုက်လျက်၊ ငိုက်ငိုက်မျက်နှာ၊ ပြင်းစွာမသွား၊ ရွာတွင်းကြား၌၊ ရထားထမ်းပိုး၊ မျှော်ရိုးတည့်တည့်၊ လေးတောင်ကြည့်၍၊ မလှည့်အာရုံ၊ ရေလုပ်ငုံသို့၊ ခြေစုံရှေ့တွင်၊ ရပ်သည် မြင်မူ၊ ပွတ်စင်ရောင်မောင်း၊ စလောင်းလက်စွဲ၊ လှူဆဲဆဲ၌၊ လက်ဝဲလှစ်ခွါ၊ လက်ယာညွတ်ခံ၊ ၀ိနည်းကံနှင့်၊ တစံတည်းပင်၊ ယွင်းမထင်သည်။ ။ မဂ္ဂင် ကူးတို့ လှော်မည်ဘို့။
တစဉ်တပြင်၊ ဘုံသုံးခွင်၌၊ လွတ်ချင်သောကွေ၊ ကျင့်ဘူးလေသား၊ သက်သေ သော်ကား၊ ရေသော်များ၏၊ မင်းသားတေမိ၊ ဣသိဇနက်၊ တောထွက်လေဘူး၊ ဂုဏ်အထူးနှင့်၊ ကျေးဇူးများစွာ၊ သုမေဓာတို့၊ မြိုင်သာတောဖျား၊ သစ်သီးစား၍၊ လေးပါးဗြဟ္မ၊ ၀ိဟာရကို၊ ရွရွစီးဖြန်း၊ ကမ္မဋ္ဌာန်းကြောင့်၊ မစွန်းသီလ၊ ဈာန်ပျံရ၍၊ ဗြဟ္မဘုံနေ၊ ပျော်ဘူးလေ၏၊ လူ့ပြေခါသင့်၊ သစ္စာပွင့်က၊ ထိုနှင့်တကွ၊ ဈာန်မရတည့်၊ နောက်မှဝါသနာ၊ ပါစိမ့်ငှာလျှင်၊ သဒ္ဓါအလွန်၊ ရှိသင့်တန်ဟု၊ သုဿန်,ရုက္ခ၊ အရညနှင့်၊ တူကွမကွာ၊ သောသာ, နိသစ်၊ ကျိုက်လစ်ပံ့သကူ၊ ဆောင်ယူမြဲဘိ၊ တိစီဝရိက်၊ ကျင့်ဝတ်စိတ်ဖြင့်၊ သိေဿာမကွာ၊ အရိယာတို့၊ ယထာသန္တတိ၊ မရှိနှိုင်းပြိုင်၊ ပတ္တပိုင်နှင့်၊ ခရိုင်ရောရု၊ ခလုပစ္ဆာ၊ ဧကာသန၊ မလွတ်ရတည့်၊ ခံထဆွမ်းဝတ်၊ ပိဏ္ဍပတ်ဖြင့်၊ မပြတ်သမ္ပဒါန်၊ အမှန်မြဲပင်၊ ရှေးအစဉ်မူ၊ ဓူတင်အမျိုး၊ သုံးဆယ့်ကိုးနှင့်၊ ကျင့်ရိုးအမှန်၊ ဓိဋ္ဌာန်ဝိကင်၊ ရှစ်ရပ်လုံ့လ၊ ကြောင့်ကြ ဆယ်ဖြာ၊ ပစ်ခွါရှောင်ထ၊ အရိယတို့၊ ၀ံသလေးသွယ်၊ စင်ကြယ်သီလ၊ သန္တောသဟု၊ ဓမ္မကျင့်မှု၊ ဆဲ့နှစ်ခုကို။ ။ သာဓုနတ်တို့ ခေါ်မည်ဘို့။
ဒီတပတ်တော့ ဒီလောက်ပါပဲ၊ ရှေ့တပတ်တွေမှ စလေဦးပုညနဲ့ အချုပ်တန်းဆရာဖေတို့ရဲ့ သံဝေဂတေးထပ်တွေ ဆက်လက် ဖော်ပြပါဦးမယ်။
၇၊ သြဂုတ်၊ ၂၀၀၉
Posted by မေဓာဝီ at 2:34 PM2comments
Labels: ကဗျာသင်္ဂဟမေဒနီ, ရှေးကဗျာများ
မနေ့က ဥပုသ်စောင့်တာမို့ ညဘက် စောစော အိပ်ဖြစ်တော့ မနက်အစောကြီး နိုးနေပြီး အိပ်ရာက မထခင် ဥပုသ်ထွက် ဘာစားရင် ကောင်းမလဲ စဉ်းစားမိတယ်။ အမေ့အိမ်မှာ ဆိုရင်တော့ နောက်တနေ့ ဥပုသ်ထွက်မယ်ဆိုရင် အမေက ညကတည်းက ဘာစားချင်လဲ မေးပြီး စီစဉ်ထားပေးနေကျ။ မုန့်ဟင်းခါး၊ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ၊ နန်းကြီးသုတ် စားချင်သလား၊ ဆီထမင်း၊ ကောက်ညှင်းပေါင်း၊ အကြော်၊ ထမင်းကြော်၊ ထမင်းဖြူနဲ့ ပဲပြုတ်၊ ငါးခြောက်ကြော် … စားချင်သလား၊ ဒါမှမဟုတ်လဲ ပဲ နံပြား၊ ပဲ အီကြာ၊ ပဲ ပလာတာ … စားချင်သလား … စသဖြင့်ပေါ့ … ကိုယ်စားချင်တာလေး စဉ်းစားပြီး ပါးစပ်က ရွတ်လိုက်ရုံပဲ။ အမေက စိတ်တိုင်းကျ စီစဉ်ပေးလေ့ရှိတယ်။
အမေစီစဉ်ပေးတာ မစားချင်သေးဘူးဆိုရင်လဲ အဖေနဲ့အတူ လက်ဖက်ရည် ဆိုင်တွေ သွားပြီး ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် စားနိုင်ပါသေးတယ်။ နီးနီးနားနား မော်ဒန်က လက်ဖက်ရည်နဲ့ ဆမူဆာ သွားစားမလား၊ လပ်ကီးဆဲဗင်းမှာ ပဲပြုတ်နဲ့ ထမင်းဖြူကို ဆတ်ခြောက်မွှ လေးနဲ့ စားမလား၊ စိတ်တိုင်းကျမှာ ဆိတ်စွပ်နဲ့ နံပြား သွားစားမလား … (အဟမ်း … ရေးရင်းနဲ့ သွားရည်တောင် ကျမိပေါ့။ လွမ်းမိပါသည် … မြန်မာပြည်။) သားအဖနှစ်ယောက် လက်တွဲလို့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထဲ သွားနေကျ။
အခုတော့ အိပ်ရာထဲမှာ နှပ်နေရင်း စားချင်တွေ လျှောက်တွေးပြီး ဘာစားရမလဲ စဉ်းစား နေမိတယ်။ ဥပုသ်ထွက် ဆိုတော့ကာ ကောင်းကောင်းစားရမယ်လေ။ မနေ့က တနပ်တိတိ အဆာခံထားတာ မဟုတ်လား။ :D စဉ်းစားရင်း မှေးခနဲ ပြန်အိပ်ပျော်သွားတုန်း အမေစီစဉ် ပေးတာလေး စားလိုက် အဖေနဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် လျှောက်သွားလိုက် အိပ်မက်တွေတောင် မက်နေလိုက် သေးတယ်။ နောက်မှ မဖြစ်သေးပါဘူး … ကိုယ်စားဖို့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် လုပ်မှပါပဲ ဆိုပြီး ကမန်းကတန်း အိပ်ရာထ မျက်နှာမသစ်ခင် ဘလော့ကလေး ၀င်ကြည့်ပြီး ဟိုတနေ့က ကိုလူထွေးရေးထားတဲ့ နံနက်စာ ကဗျာလေးကို ပြန်ဖတ်မိတယ်။
ကိုလူထွေး ဖိတ်တဲ့ နံနက်စာ
ကိုလူထွေး ဘလော့မှာ အဲဒီကဗျာ တင်တော့ ကျမလဲ နောက်ချင်တာနဲ့ ကွန်မန့်ထဲမှာ ခုလို ရေးခဲ့တယ်။
ဒီရောက်ကတည်းက မနက်စာဆို ဖြစ်သလိုသာ စားနေတာ အကျင့်ပါနေပါပြီ။ ကိုလူထွေး ရေးသလိုတောင် မစားနိုင်ပါဘူး။ ပေါင်မုန့် ၂ ချပ် ထောပတ်သုတ်၊ လက်ဖက်ရည် သို့မဟုတ် ကော်ဖီနဲ့ မျှောချခဲ့ရတဲ့ မနက်ခင်းပေါင်း မနည်းတော့ဘူး။ အခု ကျောင်းပိတ်ရက် ဦးရီးတော်အိမ်မှာ နေရတုန်း ကိုယ်စားချင်တာတွေ လုပ်စားခွင့် ရနေတာနဲ့ ဒီနေ့ မနက်စာကို အပေါ်က ရေးခဲ့တဲ့ အတိုင်း လုပ်စားဖြစ်တယ်။ ဒီမနက်စာရဖို့ ဗမာပြည်မှာ ဆိုရင်တော့ ပါးစပ်ကလေး တချက် လှုပ်လိုက်ရင် ပြီးပေမဲ့ အခုတော့ဖြင့် တော်တော်လေး လက်ဝင် လှပါတယ်။
ကိုယ်တိုင်ပြုတ်တာပါ။ ဘုရားစူး။ ပဲကို တညတိတိ ရေစိမ်ရတယ်။ နောက်တနေ့ မနက်ကျတော့ ဆန်ကာလေးထဲထည့် အပေါ်က ရေစိုအ၀တ်ကလေးနဲ့ အုပ်၊ ၂ ရက်လောက်ထား၊ အညှောက်လေးတွေ ထွက်လာတော့မှ ပြုတ်ရတယ်။ အကြာကြီးပဲ။ မီးအေးအေးနဲ့ စိတ်ရှည်လက်ရှည် တနေကုန် တနေခမ်း ပြုတ်ရတာ။ အပြုတ်လိုရင် ပဲမနပ်တော့ စိမ်းဆတ်ဆတ်နဲ့ စားမကောင်းဘူး။ အပြုတ်မလိုဖို့ အရေးကြီးတာပဲ။ :)
oven နဲ့ ထည့်ကင်ရတာမို့ သိပ်အခက်ကြီးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အကင် မတော်ရင် တူးတတ်တယ်။ ခဏခဏ ဖွင့်ဖွင့်ကြည့်နေပြန်တော့လဲ တော်တော်နဲ့ မရပြန်ဘူး။ ခုဟာကတော့ အမွလွန်ပြီး နည်းနည်း ကြေသွားတယ်။ ကျမ အတွက်တော့ ကိစ္စမရှိပါဘူး။ ကြေသွားတော့ ၀ါးရတောင် သက်သာတယ်လို့ သဘောထားလိုက်ပါတယ်။
တိုရေရှားရေ နည်းနည်းပဲ ခင်းကျင်းပြထားတာ ကပ်စေးနည်းတယ် မထင်ကြပါနဲ့။ မနက်စာဆိုတာ အများကြီး မစားရဘူး မဟုတ်လား။ ကျမရဲ့ ဥပုသ်ထွက် မနက်စာကတော့ ဒီမျှပါပဲရှင်။ ကြိုက်ရင် သုံးဆောင်သွားကြပါ။
၆၊ သြဂုတ်၊ ၂၀၀၉
Posted by မေဓာဝီ at 9:42 AM 11 comments